Nahoana aho Nanambady White Girl — Trip LEE - OFISIALY SITE
Nahoana aho Nanambady White Girl
Isaky ny mamoaka sary ny fianakaviako tao amin'ny media sosialy, ny valin-dia mahafinaritra foana. Ny mahazatra indrindra dia, "Ny zanakao dia tena tsara tarehy!"Na" Inona no tsara tarehy fianakaviana!"Fa iray amin'ireo iombonana hafa valiny dia, "Moa ny vadinao fotsy?"Ny olona manontany ahy indraindray mampiseho koa. Ny valiny dia eny. Ny vadiko dia fifangaroan-Hongroà, Italiana, ary Poloney-izay ny ankamaroan'ny olona dia midika fotsiny eny, izy ny fotsy. Izany no ilaina ny sasany, fa manafintohina na mandiso fanantenana ny hafa mihitsy aza. Tsy mino aho fa na iza na iza dia tokony ho tohina na diso fanantenana ny volon-koditra fanambadiana, fa mbola te hiresaka momba ny antony ivelan'ny nanambady ny "hazakazaka.
Ny fanapahan-kevitra ny hanambady olona avy amin'ny foko hafa fiaviana dia tsy ho mafy ny anankiray ho ahy. Tsy mbola nipetraka ary nanoratra avy ny mahatsara sy maharatsy ny mifampiresaka lisitra. Na raha nataoko, ny zava-misy fa ny vadiko dia tsy nahita ny fizaràna ny "Martin" dia ho eo amin'ny mpisoloky sokajy. fa amim-pahatsorana, Tsy agonize noho izany, na mitady torohevitra momba ny na dia OK. Aho dia resy lahatra fa izy no vehivavy ho ahy ny hanambady, na dia tsy mainty.
Misy mihevitra fa tsy hanambady olona tsy mitovy foko tahaka ny azy ireo, dia mamelà ahy hiresaka aminareo ny antony nataoko.
Raha tsorina, Foana aho tokony hanambady ny vehivavy mainty. Nahita vehivavy tsara tarehy amin'ny fiaviana rehetra, fa mainty ankizivavy ireo ny "tian'ny." Fa rehefa tonga eo amin'ny toeram-pianarana amin'ny oniversite 2006, Tsy mbola mitady vady mihitsy. Fotsiny aho te hitombo amin'ny finoana sy hahazo fanabeazana tsara. Ny rakikira voalohany vao tonga avy, ka dia nanana be dia be ny zavatra hafa mba hifantoka amin'ny. Fa tahaka ny olona nihaona tao amin'ny sekoly, ny sophomore atao hoe Jessica tena nisarika ny saiko ary lasa mpinamana.
Izahay nihazakazaka ao amin 'ny faribolana ary niafara manatevin-daharana ny fiangonana ihany, noho izany dia nahita samy hafa be dia be. Ary vao mainka azoko ny hahafantatra azy, dia vao mainka Tiako ny Niaraka Tamin'ny azy. Tena tia an'i Jesosy izy ary izy nanana ankizy izany fahavononana hanao na inona na inona izy nanontany. Ny fangoraham-po ho an'ny olona sahirana nanohitra ahy, ary izy nanana manetry tena am-po izay namaly ny Teny. Nandritra ny taona voalohany, Nijery azy sorona maro ora ny fotoana manompo ao amin'ny fiangonantsika. Ankoatra izany rehetra izany, Tiako tokoa ny manodidina azy. ny resaka, na lehibe na adaladala, nikoriana mora foana. Àry aho nanomboka tamin'ny farany mba manontany tena, "Tokony hanambady zazavavy ity?"
Jessica tsy mitovy aho, nanantena ny ho vadiny mba hijery, fa amim-pahatsorana fa tsy manan-danja ho ahy. Aza mahazo ahy ratsy, Nieritreritra aho hoe tsara tarehy izy hatramin'ny fotoana voalohany nihaonako taminy. Ary na oviana na oviana aho nanohitra ny hanambady ny fotsy ankizivavy. Fotsiny aho fa tsy mihevitra tiako. Fa tahaka ny amin'ny nitombo ny finoako sy ny foko niova, Nanomboka nanova ny safidinao koa. Ny tena tian'ny vadiko dia ny hoe ho an'Andriamanitra, ary Jessica i. Ka dia wifed azy.
Tsy indray mipi-maso no tsapako toa aho fandaminana. Tsy mahatsapa bebe kokoa tahaka ny fandaminana mba hifantoka fotsiny ny vehivavy tia an'Andriamanitra noho ny foko. Tsy mbola te lanja ny safidinao ho vady ny izay ilaina in-bady.
Tsy misy na inona na inona voatery maharatsy ny manana safidinao, fa tsy maintsy mihazona azy tamin'ny tanana mivelatra. Fantatro ny olona sasany, izay hifantoka amin'ny mety ho an'Andriamanitra vady satria tsy mifanaraka kisendrasendra tian'ny sasany. Ny sasany ny safidinao tena tsy manan-danja fa be. Ny sasany dia mety mihitsy aza ny tiany ho adala, ka tsy maintsy manaiky azy rehetra Soratra Masina.
Rehefa ianao sy ny vadinao dia eo afovoan'ny fifanoherana, hoditra feo tsy mampaninona izany. Body karazana sy ny ara-tsosialy sata toa misy dikany. Te izy ireo mba ho araka an'Andriamanitra sy ny fanetren-tena. Ary raha mivady manomboka hitaiza ny zaza voalohany, Tsy ho velom-pankasitrahana bebe kokoa ho azy. Izy no mahagaga araka an'Andriamanitra Neny sy ny fiantraikany eo amin'ny zanako-tsy izay manana na inona na inona atao aminy foko fototra. Tsy maninona ny zava-maniry amin'ny vadiny, fa tsy maintsy manaiky ny faniriantsika ho izay tian'Andriamanitra ho antsika amin'ny vadiny. Inona no tiako ka nila dia araka an'Andriamanitra ny ankamaroan'ny mpiara-miasa, ary izany indrindra no nomen'Andriamanitra.
CLL • Oktobra 31, 2013 amin'ny 1:50 PM • navalin'i
Marina izay nolazainao Trip. Ny vadiko dia sady fotsy, ary Izaho no Black foana aho hahazo nanontany izay nahatonga ahy hifidy olona ivelan'ny ny firazanana. Mamaly foana aho fa Andriamanitra no nifidy ahy ho ahy Ary nanao toy izany asa mahagaga, tsara kokoa noho izaho mbola afaka nanao an-tanako manokana. tsara Andriamanitra! Ataovy hatrany izay atao! 116! Jesosy aloha ianao mandra-ambanin'ny tany!
Ericka • Novambra 17, 2013 amin'ny 8:59 aho • navalin'i
Misaotra ny marina Trip Lee. manaiky aho. Afaka manana safidy fa tsy maintsy mihazona azy tamin'ny tanana mivelatra ho Kristianina, satria ny voalohany dia ny fanoloran-tena Kristy sy ny vadinao tsy maintsy hanohana izany. mitovy yolked…
Wadsworth • Janoary 2, 2014 amin'ny 3:52 aho • navalin'i
Great Lahatsoratra Trip.
Manana olana aho mijery ny bilaogy eo amin'ny findaiko. Ireo pejy toa raikitra misakana havia-havanana scrolling sy teny amin'ny faran'ny andalana tsirairay toa tapaka tsy ho ny lamba ka indraindray aho tsy misy dikany ny sasany sazy. Tsy azoko antoka raha izany no olana miaraka amin'ny navigateur Na mety Ara-Teknika ao amin'ny bilaogy ny setup. Fotsiny te-hitondra izany fotsiny incase zavatra azo atao amin'ny farany.
Maria • Janoary 10, 2015 amin'ny 8:10 PM • navalin'i
Ny zanako-vavy tia ny mozika. Raha ny marina, Tsy maintsy miaiky aho; Koa hataoko:). Rehefa nampahafantatra ahy aloha mba hitsidika mozika miaraka amin 'ny hafa amin'ny toerana tena, lacris) Fotsiny aho Tena faly noho ny fitarihana araka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ny mozika. Fa raha izaho kosa nijanona somary mailo. Manontany tena raha ny mozika naneho ny toetra. Ny famakiana izany Matoky aho fa ianao Nohazavain'ny mpanompon'Andriamanitra iray. Mivavaka aho mba maro fitahiana maro ho anao sy ny vady tsara tarehy sy mahafatifaty lahy. manokana miteny, ary amin'ny fotoana izay be dia be ny ratsy, Fiaviana fotsiny fa. Ny iray dia tena tsara vintana ny manana vady (raha toa ianao ka misy olona) izay tia sy manompo azy i Jesosy nanaraka tsara ilany anareo.
Adam Craven • Janoary 26, 2017 amin'ny 10:24 aho • navalin'i
AMEN!!! Tsy mbola tena azon'ny olona sasany ny antony ninia tsy nijery ny vehivavy tia an'Andriamanitra fotsiny satria tsy antonona ho ao amin'ny anankiray ny safidinao. Manana ny anabavy iray efa nanisy safidy alohan'ny fahasambarana. Farany izy nandeha ho any amin'ny tena tenin'Andriamanitra ka nivavaka momba izany sy nivavaka ary farany dia nahazo ny valiny ary aho izao 2 tam-po ary Andriamanitra lehibe matahotra rahalahy-in-lalàna!! Ianao tsy tokony ho ny safidinao eo anoloan 'Andriamanitra, satria isaky ny olona izy ireo amin'ny ankapobeny nandrora ny tavan'Andriamanitra, ary ny tiany eo anatrehanao!!
Nahledge • Oktobra 31, 2013 amin'ny 1:52 PM • navalin'i
Dope Lahatsoratra fam!
Michael • Oktobra 8, 2014 amin'ny 4:48 aho • navalin'i
Alexis • Oktobra 31, 2013 amin'ny 1:54 PM • navalin'i
Na izany aza tsara kokoa noho ny takariva iny tantaram-pitiavana.
Daniel Troutman • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:51 PM • navalin'i
Tam • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:36 PM • navalin'i
ANDRO REHETRA tantaram-pitiavana tsara kokoa noho ny takariva iny.
izy • Oktobra 31, 2013 amin'ny 6:23 PM • navalin'i
Terrell • Oktobra 31, 2013 amin'ny 1:54 PM • navalin'i
Carina • Oktobra 31, 2013 amin'ny 1:54 PM • navalin'i
Toy ny Leads, tokony hanaraka. Mieritreritra aho miteny ara-Baiboly iray ihany izahay rehetra firazanana, voalohany, avy tamin'i Adama sy i Eva avy eo tatỳ aoriana taranak'i Noa rehetra. Mety haka an'arivony taona maro sy ny taranaka jatony mba hiverenana, Fa isika rehetra avy amin'ny iray ihany dia nanomboka toerana. One hazakazaka, maro ny foko.
Britta • Oktobra 31, 2013 amin'ny 1:55 PM • navalin'i
I miombon-kevitra tanteraka! Fony tsy mbola nihaona ny vadiko foana aho nisafidy madio voaharatra mena loha, fa dia nihaona tamin'i Davida. Izy dia lehilahy sola amin'ny goatee lava ampy ho ahy ny randrana! Izy / dia izay rehetra nampanantenain'Andriamanitra ahy aho hahita amin'ny vadiny, fa raha fotsiny aho nitady fahitana iray aho, dia ho hita avy eo amin'ny zavatra tsara indrindra ho ahy Andriamanitra dia nanana!
David B • Oktobra 31, 2013 amin'ny 1:56 PM • navalin'i
I mankasitraka izany. I cant miandry till ny azo ampiharina, Izany no fomba manao fitia eo amin'ny isan'andro, boky no cowritten ny Trip sy Jessica!
Enana • Oktobra 31, 2013 amin'ny 1:57 PM • navalin'i
Misaotra anao noho izany diako mahavariana lahatsoratra. Raha ny marina aminareo, Tsara tarehy aho gaga rehefa nahita ny vadinao ny hazakazaka. saingy, Mino aho fa ny drafitra ho an'ny fiainantsika, Tsy mitovy foana ny zavatra miandry na te. Noho izany, ity lahatsoratra ity dia namporisika ahy hivavaka sy hahazo ny antony manosika tsara; koa raha tsara ny olona no tonga teny an-dalana, Raha sitrak'Andriamanitra, Vonona aho. Misaotra anareo indray Bro. Tiavo ianao sy ny fam an 'i Jesoa. TAHIN'ANDRIAMANITRA.
Rachel • Oktobra 31, 2013 amin'ny 1:57 PM • navalin'i
Wow. Feno fankasitrahana aho noho ny misokatra sy ny tso-po mikasika io lohahevitra io, tahaka ny Azoko antoka fa tsy niantso ampy! Izaho sy ny vadiko no tsy miova “hazakazaka” fa afaka mahita izany adihevitra ihany ny zavatra adaladala toy someones sata ara-tsosialy (Inona no karazana asa izy ireo), raha manan-janaka, inona ny lasa efa, na inona na inona ny wether izy ireo ao amin'i Kristy, na tsia. Fantatro fa ny zava-misy efa nanambady aho vadiko na inona na inona ny hazakazaka, sata, na lafika. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavana manarona ny zavatra rehetra, ary mandatsaka ny vaovao sy tsara tarehy rehetra,. Ary toa anao nanao hoe:, Fantany izay ilaintsika mihoatra noho ny tenantsika ataontsika. Misaotra anao amin'ity lahatsoratra ity!!
Paul • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:00 PM • navalin'i
izany no…. fanafahana.
Crystal • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:01 PM • navalin'i
tena tsara tarehy. Tiako fa voalaza ny fomba niova ny safidinao, rehefa niova ny laharam-pahamehana. Andriamanitra awesome, Manana ny tsara indrindra ho antsika tsirairay, fa mila mivoaka avy ao amin'i amin 'ny fomba mba hahafahantsika mahita, mandray sy hankasitraka azy ireo. Mainty aho vehivavy, izay tsy miraharaha loatra ny hazakazaka. Ny vavaka ataoko dia ny mahita ny olona araka izay mahita azy ireo sy nandeha araka ny sitrapony. Dia izay. Izy no Mpanao antsika, izay isika ho mpanavakavaka?
serfa • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:02 PM • navalin'i
Lehibe bilaoginy fa olona mila mamaky. Armeniana Libaney aho ary ny vadiko mainty ary nandeha ary dia mandalo be dia be ny alahelo avy amin'ny fianakaviako.
Tsy mbola nanana safidy ny foko. Fony tsy mbola voavonjy aho 3 lehibe fifandraisana ny samy hafa foko sy rehefa natao voavonjy, ary nitombo tao ny fifandraisako amin'i Kristy izany rehetra mikasika ny hoe iza aho “antsoina hoe” mba hiaraka; izay Andriamanitra “voatokana” ho ahy.
Mihalehibe fa tsy dia be ny safidy, fa ny fepetra takiana amin'ny fianakaviako ny hanambady ao anatin'ny ahy ny foko, fa tsy miraharaha; Heverina foana aho ondry ny mainty ihany…
Ho ahy izay rehetra manan-danja dia ny zavatra ny sitrapon'ny Tompo no ho an'ny fiainana sy ny vadiko rehefa nambara tamiko aho, ary toy izany fiadanana izany satria fantany fa Izaho nitsangana teo ny tany. Mbola isika mivavaka ho an'ny fianakaviako ny fo mba ho lasa malefaka ny, fa amin'ny farany izay zava-dehibe dia rehetra fa Izaho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny lalana ary tsy misy toerana hafa tiako be..I soa aman-tsara aho, ary tsy manana ahiahy ao amin'ny sitrapony.
Michael • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:03 PM • navalin'i
Izany no hafatra lehibe Trip. Tsy mbola nahatsiaro ho liana amin'ny ny foko, Hispanika, fa tahaka ny dehibe aho bebe kokoa eo amin'ny finoana, dia tsy efa toa lasa bebe kokoa ho ahy fa feo hoditra tsy maninona toraka. Izany dia mamelombelona mamaky teny sy Misaotra an'Andriamanitra aho fa nomeny anareo vehivavy lehibe toy izany mba hanampy anao hanohy hanome voninahitra Azy. Misaotra ny fitaomam-panahy rehetra ny hafatra!
Jarred • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:03 PM • navalin'i
Mivady sy Izaho dia fotsy hoditra. Ny Tompo dia nanosika antsika ho voalohany natsangana ho an'ny ankizy. Amin'izany dingana afaka misafidy izay tianao. Fa efa ho avy toy ny maka ny alika. Na izany na iray amin'ireo safidy azonao mba ho hazakazaka. Tsy manana olana amin'ny hazakazaka misy, na izany aza, izay no avy Halany mainty hoditra. Noho izany dia nifidy ny tsy hanaraka ny zaza mainty hoditra noho ny aminy sy ny fomba ho raisina izy ireo rehefa nitondra azy ireo indray mba hahita ny dadabe sy bebeny. Matetika aho no nitolomako tamin'ny izany safidy. Ve isika hanao ny zavatra tsara? Ireo no miaro ny ankizy avy amin'izay mankahala, na dia milalao an'Andriamanitra isika eo amin'ny fiainantsika? Mahazo aina isika amin'ny izany safidy ankehitriny, satria ny, fa ahoana ny hevitrao?
DeeDee • Oktobra 31, 2013 amin'ny 6:26 PM • navalin'i
I mamaky ny lahatsoratra… Mainty aho, ary noraisin'ny ny ray aman-dreny izay fotsy. Na ny mpitsara, izay nandamina ny raharaha dia mainty. I Neny sy i Dada dia natahotra satria nipetraka tany amin'ny faritra izay ary iray hafa ny iray tam-po mety tsy natsangany Dia tahaka izay niambina ny fitsarana an-tendrony amin'ny olona. Izany lazaina, Natoky an'Andriamanitra izy ireo, ary nahita ny toe-javatra na oviana na oviana ny fiahiana.
Heveriko ary mino fa ianao sy ny vadinao nanao izay tsara indrindra ho an'ny ny fianakavianao. Toe-javatra tsirairay dia manam-paharoa sy Andriamanitra dia manome antsika ny ohatry ny fahasoavana mba hitety ny fiainana ny kely sy ny lehibe fotoana. hamporisihana! Iza no mahalala, Angamba ianao hahazo ny fahafahana mandany indray ary mifidy mainty (na foko hafa) zaza! Fantatr'Andriamanitra ny fonareo avy eo, ary fantany fa na dia ao amin'ny indray mipi-maso.
Cece • Oktobra 31, 2013 amin'ny 7:51 PM • navalin'i
I avy any amin'ny fianakaviana misy ray aman-dreny ny fotsy hoditra no nandray 6 mainty ny ankizy. Mihevitra aho fa ny tena marina ho anareo ny tena rehetra manaiky fa nanangana ny hazakazaka ivelan'ny midika hoe tsy maintsy ho tena niniana momba ny famelana ny zanakao mba mahatsapa ny kolontsainy, ary hijery ny alim. Raha efa tena Andriamanitra niantso anareo mba hanenjika ny mainty fitaizana zaza, Avy eo dia tsy tokony ho izany mora ny manana ny fianakavianao hery mitarika anao nivoaka avy tany izany fanapahan-kevitra. Na izany aza, ny fanontaniana tokony nanontany, dia ny fanapahan-kevitra hanaraka bebe kokoa momba ahy, na ny ankizy izay mila ny an-trano? No Hataoko fa hiaritra ny valifaty avy amin'ny namana sy ny fianakaviana izay tonga amin'ny nanangana zaza ivelan'ny ny hazakazaka? Moa ve aho nanantena ny zaza mba hatsangana amin'ny fomba izay manery azy ireo hanome ny hoe iza izy ireo ho mpikambana ao amin'ny fianakaviako? Hamela toerana ho an'ny zanako mba ho afaka hitolona noho ny maha-piainana eo amin'ny tontolo? No nanangana ny fiaraha-monina amin'ny fomba izay miandany amin'i kokoa ny mahaliana ahy ho fotsy ny olona mba hanaraka ny tena ilain'ny zaza? Ahoana no etika ity dingana fananganan'anaka?
Nanangana zaza iray manontolo dia midika fisainana fanovana, sy ara-batana namindra toerana an'ireo, raha ny tontolo iainana ianao eo amin'ny tsy hiantra ny zavatra ilain'ny zanakao. Fifandraisana dia mila haorina amin 'ireo izay tonga avy amin'ny fomba fijery izay afaka tanteraka na oviana na oviana an'i Jeremia ny (ho mainty). Isika dia miaina ao anatin'ny tontolo mpanavakavaka, ary tsy maintsy ho tena mahafantatra ny anao sy ny zaza no mitaiza. Raha toa ka nisafidy ny tsy manaiky fa, dia amin'ny fomba maro no manao ny hanimba ny tenanao sy ny zaza no mandany. Fananganana momba anao dia tsy ny fahazoana ny hamonjy ny mahantra mainty zaza. Fa momba anao rehefa antony avy any amin'ny fitiavana sy tena velona ny fo 'ny filazantsara ho fanavotana sy ho tia ny namanao. Tsy ny momba anao, ho toy ny olona fotsy.
Amin'ny lafiny maro ireo fanontaniana vitsivitsy fotsiny no mila miatrika. Raha tsy vonona hiaritra izany sy ny sisa maro hafa, dia tsy nanangana mainty zaza fanapahan-kevitra mety tsara. Aho etsy ambany dia namoaka lahatsoratra iray izay mamela anao manontany ireo zavatra ireo amin'ny fomba lalindalina kokoa amin'ny alalan'ny fanasana hazakazaka ho any amin'ny fifanakalozan-kevitra ary mahazo ny topimaso ny adoptees sy ny zava-niainany.
Tsy izay rehetra tantara dia tantara fahombiazana ary matetika fotoana izay dia tsy ho nandre ny tantara. Sambatra aho noho ny zavatra niainany sy ny fianakaviako. Amin'ny fomba maro, Efa nomena fahafahana maro mba hijery ny hoe iza moa aho amin'ny fahafahana maro, na izany aza, Fantatro fa dia tonga noho ny vidiny, ary mila hiala toerana ho an'ny izay ho niresaka momba.
Kara • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:05 PM • navalin'i
HaHa! “Ny tena tian'ny vadiko dia ny hoe ho an'Andriamanitra, ary Jessica i. Ka dia wifed azy.” Andalana tsara indrindra ao amin'ny bilaogy. Faly Andriamanitra hitarika anareo ho any vady lehibe. :)
John Evangel • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:08 PM • navalin'i
Long ny mpamaky & mpihaino. Voalohany Commenter. Tena tiako ity lahatsoratra ity.
Ny fianakaviako dia Nizeriana, ary ny raiko naniraka Ahy kisendrasendra andinin-teny iray Talata maraina amin'ny 4 ora maraina nanao hoe: “Raha te-hanambady, ho azo antoka ny olona avy any amin'ny fototra iray ihany tahaka anao ihany. Farafahabeny, tany izany.”
Mazava ho azy, Tsy hitako izay holazaina, satria mbola tsy niresaka momba izany teo anatrehan'i. #hafahafa.
Fantatro fa Izaho ho tia ny vadiko, rehefa vonona aho, na inona na inona endrika, fototra ara-poko, sakana ara-pitenenana, ary hafa azo atao fahasamihafana. Ny zava-dehibe indrindra ho ahy dia ny hoe izy no anisan'ny ny fianakaviako – Ny fianakaviana. Ampy izay.
Tilda • Oktobra 31, 2013 amin'ny 6:37 PM • navalin'i
Hahaha. Naija ray aman-dreny dia afaka ny ho henjana momba ny fanambadiana . Fa ny sasany dont fikarakarana izay U hanambady
QuentinLawson • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:09 PM • navalin'i
namana • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:12 PM • navalin'i
Misaotra noho ny fizarana ny fonao Trip. Izahay rehetra toy izany koa rehefa haka ny zavatra teo hoditra. Andriamanitra no namorona ny tsirairay, ary miavaka ny fomba tsy miangatra araka ny famolavolana manokana. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao.
Josh ः iray • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:12 PM • navalin'i
Tsy misy zavatra ratsy tahaka anao nilaza Trip momba ny hanambady olona tsy mitovy firazanana. Ny zava-dehibe dia hoe iza moa ianao, na manambady aho fa tia an'i Jesosy (marika 12:30 DIEM) ary izy ho tia anao indray ary fa tia azy tahaka an'Andriamanitra tia ny Fiangonana. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao dalana
MichaelJ • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:13 PM • navalin'i
Mahatahotra rava ny fomba foana ny Tompo no nanova ny “mason 'ny fo” mba hampifanaraka ny “mason 'ny lohany”. Afaka mifandray amin'ny olana, na dia tsy nanambady aho mbola, satria araka an'Andriamanitra vehivavy manao azy ho te hampifaly ny Mpamonjy dia zava-dehibe kokoa noho ny eo ivelany dia toetra. Arahabaina anao ny taona rehetra ary enga anie Andriamanitra hanohy hitahy ny sisa.
JB • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:17 PM • navalin'i
I hihaino anareo Trip, tsara lahatsoratra.
Virgil • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:17 PM • navalin'i
Naniry aho ho afaka manambady ny vehivavy mainty!
Nolan • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:18 PM • navalin'i
Misaotra ny lahatsoratra! Tena nampahery ny bilaogy, aingam-panahy ahy ny manomboka manokana! Misaotra.
OJ • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:25 PM • navalin'i
Nice lahatsoratra!! Misaotra
Arthur simuchile • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:25 PM • navalin'i
Isika rehetra dia manana Ray iray ihany, fa samy hafa reny ny ran'i Jesosy ihany mihazakazaka ao anatintsika,hoditra fotsiny ihany hoditra,fa izay ao anatintsika no zava-dehibe indrindra ,wonderfull Mr Trip Lee.may Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao noho ny aingam-panahy wonderfull.
deidreBaker • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:29 PM • navalin'i
Wow! Tsy fantatro ianao efa nanambady ary izy no vehivavy fotsy, ny vehivavy ho toy ny mainty sy ny vehivavy 'Andriamanitra, Arahabaina amin'ny fikarohana ny tena fitiavana! Tiako ny fomba nanazava ny antony nanambady ny vadinao, ary tena tsy nanana koa, fa mahagaga tantara! toy izao aminao rahalahy sy ny vadiny mahafinaritra Jessica, Enga anie ianareo ry zalahy maro ny taona maro! hotahina Tokoa!
Elizabeth • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:31 PM • navalin'i
Manao ny tsara ianao teboka! Aho mianatra avy amin'ny lahatsoratra fa tsy maninona ny hoditra feo, fa ny zava-dehibe dia ny fomba ny olona miara-dia amin'ny amin'Andriamanitra sy ny fo!! Misaotra anao nizara tsara tarehy tantara.
Jimmy Sorrells • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:32 PM • navalin'i
Izany no mahatonga Tonga lafatra. Inona no tsy misy dikany ny fanavakavahana. Koa satria tsy misy afa-tsy iray ihany hazakazaka, mba ho mpanavakavaka dia ny hanohitra ny olombelona. Misy ny olona samy hafa vondrona nefa iray monja no hazakazaka, fa izao toa ho very hevitra amin'ny olona no niresaka izany aza ny ny fahamarinana.
Timo • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:33 PM • navalin'i
Great lahatsoratra, Trip!
JeffreyCravens • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:34 PM • navalin'i
“Tsy mbola te lanja ny tiany ho vadiny noho izay nilaiko tao vady.”
Toy izany fanambarana marina sy lalina. Ny raiko dia mainty, reny dia fotsy, efa nanambady 35 taona. Ary ny sasany fa lava volo taona koa eo afovoan'ny ady ireo, “hoditra feo” Tena indrindra dia tsy zava-dehibe. Ny Tompo dia efa mamindra fo sy mahatoky.
Trip, Ity lahatsoratra ity dia mamelombelona Bro. Isan-kerinandro aho niala fankalazana ny Taona Voalohany Amin'ny Fanambadiana ho an'Andriamanitra izay olana vady ahy sy ny fangoraham-po isan'andro. Izy ihany koa no mitranga ho Latina, frantsay sy Hawaii mendrika. Noho izany mamaky teny izany efa be mankasitraka.
mamerina ny fisaorana anao, Jeff.
Walter • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:34 PM • navalin'i
Mahatsapa toy izany koa Eritrereto ivelan'ny boaty mainty aho no tsy te-hanambady amin'ny firazanana tsy efa ny antony tiako hafa karazana vehivavy
Michelle • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:35 PM • navalin'i
Misaotra anao nizara sy ny fandatsahana fahazavana ity. na fotsy, mainty, sns ianao nikasika ny izay tena zava-dehibe. Ny fanahin 'ny fanavakavahana no nisakana anay nandritra ny fotoana ela tany be dia be ny faritra. Mino aho fa namaky isika amin'ny alalan'ny Na izany aza. hotahian'andriamanitra anie ianao & ny fitomboan'ny fianakaviana.
ChevyThompson • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:36 PM • navalin'i
mitovy amin'ny ny tantara. Misaotra 4 fandefasana
Bachizzle • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:37 PM • navalin'i
Manana eritreritra, Aho teratany Amerikana ( indiana) Hitako fa ny fomba anananao sy manao diany. Nianatra tany amin'ny Southern aho sem. ary ny olona manontany ahy, rehefa ianao no hanambady? I mamaly amin'ny “hihavian'ny fotoana tsara sy ny marina aho”. I mitandrina ny ho mailo, ary hoy izaho: “te vady araka an'Andriamanitra, izay ho toy-pitia tamin'i Jesosy fa Ho voninahitra ny teniny”. Ary ny hazakazaka olana no miakatra Fa hoy izaho dia sarotra ny mahita vady izay manome voninahitra Jesosy no teny izay teratany Amerikana tahaka ahy noho ny ara-kolontsaina sy ny fitaoman ny endrika pentacostalism sy ny rafitra matriarchial amin'ny teratany Amerikana kolontsaina. Misaotra noho ny teny
Cori ः • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:37 PM • navalin'i
Tia namaky ity lahatsoratra ity Trip. Aho be mpankafy ny anao, fa toy ny hoe ianao no misokatra mikasika ny adihevitra momba ny hazakazaka. amim-pahatsorana, hazakazaka dia tsy tokony olana raha ny amin'ny hoe iza isika hanambady. Ny hany zavatra tokony olana dia raha toa izy ireo Kristianina, ary raha toa ka mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao. Ivelan'ny tena ilaina, firazanana na volon-koditra fotsiny ny fahasamihafana eo amin'ny fomba mijery. Efa mitondra ny datin 'ny firazanana ivelan'ny. Aho mainty sy ny taloha dia Koreana / White. Tsy mbola nisy olana ho antsika, fa tsarovy fotoana isika rehefa mahazo stares avy amin'ny olon-kafa. Tena mahaliana traikefa, nefa tsy misy ny negativity (izay tsy be) dia hanakana ahy tsy niaraka olon-kafa ivelany ny foko, na hanambady azy ireo. Izany no tsy olana amiko, ny fianakaviako na ny namany. Ny teboka dia, Isika rehetra dia manana ny safidinao, fa tokony hifantoka amin'ny zavatra tian'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika voalohany. Mahafinaritra ny mahita fa io dia tsara resaka.
Paul • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:40 PM • navalin'i
Misy fomba manokana izay ahafahantsika miresaka momba ity olana ity, toa ahy sy ny U.
Twinkle • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:46 PM • navalin'i
Misaotra an'Andriamanitra aho fa nanoratra ilay lahatsoratra, satria toy ny tokan-tena ny vehivavy kristianina, Azoko tsara fa zava-dehibe ny ho tanteraka misokatra ny izay lazain'Andriamanitra, anisan'izany ny hoe iza izy avelany hiditra ao ny fiainana sy ny mihitsy aza maka avy ao aminy. Feno fankasitrahana aho noho ny fanambarana izay natao “tsy maintsy manaiky ny faniriantsika ho izay tian'Andriamanitra ho antsika amin'ny vadiny”. Zavatra tsy ao tenany Manampy ahy hanakatona eny ny fomba fisainako ka nahita mba hifantoka amin'ny zavatra tian'Andriamanitra ho ahy sy ny fiainako. Mainty aho ka preferenced lehilahy mainty; na izany aza Andriamanitra dia miasa amin'ny am-poko tao amin'io faritra io aho satria manomboka hitady azy ny mba ho vadiny araka an'Andriamanitra. Eritrereto hoe firy ny olona tena misafidy ny ratsy olona hanambady na tara avy amin'ny hoe iza Andriamanitra ho azy ireo noho izy ireo fotsiny ny fameperana / safidinao. Great lahatsoratra! Efa Tena nitahy ahy sy azoko antoka fa olona maro hafa.
skateboard • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:48 PM • navalin'i
Amin'ny maha avy any amin'ny tany atsimo sy ny biracial, I efa nataonareo tamin'ny ady momba ny volon-koditra be dia be mampiaraka. Afaka mandeha tsy ho zaza tsara tarehy 'Andriamanitra ny zavatra sasany mihevitra ny fahadisoana na fanambaniana teny. Preciate no miteny avy ity! Antenaiko ny vadiko tahaka ny manaiky ahy ho aminao sy ny vadinao dia ny tsirairay! 116!
Jon • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:50 PM • navalin'i
Tsara lahatsoratra Mino aho fa be dia be ny fotoana dia tsy voatery isika misafidy iray na foko loko fototra, dia izay zavatra taloha. Amin'ny maha-Kristianina anao sy mamela an'Andriamanitra mba hanokatra ny masonao no nahita ny zava-tsoa. Arahabaina Bro.
hitahy • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:51 PM • navalin'i
Ricky • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:52 PM • navalin'i
Great Lahatsoratra Trip! Tsy misy toerana ao amin'ny filazantsara ny fanavakavahana.
Daniel Troutman • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:53 PM • navalin'i
Heveriko fa mangatsiatsiaka sy ny mahira-tsaina ny anao hanoratra ity lahatsoratra ity. Manampy ny olona izay tsy mahalala ny fitiavana sokajy misy dikany toy ny firazanana na firenena. 1 Corinthians 13 Tsy milaza na inona na inona no momba ny hazakazaka; dia miresaka momba ny faharetana, fanetren-tena, sy ny fahendrena. Big dehibe ho an'ny lehibe lahatsoratra!
hanao • Oktobra 31, 2013 amin'ny 2:53 PM • navalin'i
Right tamin'ny! Izany no fitahiana. Aho no nanontany, diso fanantenana hita tarehy, Ary nahare aho ry namana niresaka ny antony / fomba nanorim-ponenana, na lasa “nasainy nokapohina”. Nivavaka aho mba hahazo ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra, ary Izy no naniraka Ahy izy. Tiako ny vadiko, izay mitranga ho fotsy (Mainty aho). izy & ny zanakay no fitahiana lehibe indrindra avy amin 'Andriamanitra, ary tsy te tiako izany fomba hafa. Misaotra anao noho ny misokatra ny marina. Ny fitiavana no Mihoatra ambony dia ambony rehetra.
mirehareha ny 116!
Major • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:02 PM • navalin'i
Trip tantara lehibe sy ny Arahabaina. Maniry anao aho ho atao mazava fa ny safidy ataon'ny vehivavy nanana na inona na inona ny ifandraisany amin'ny zavatra tsy mety na ny maha-tsy ampy amin'ny vehivavy mainty. Ny tantara mamela banga eo amin'io faritra io. koa, dia tokony ho mazava tsara fa angamba ny safidy ny fiangonana sy ny sekoly nametraka anao eo amin'ny toerana mba ho vitsy kokoa ny manodidina ny vehivavy mainty. Maro ny miaina toy ny mainty hoditra vitsy an'isa ao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiaraha-monina sy izao manana vokany eo amin'ny hazakazaka ihany fanambadiana. Izaho manokana dia tia ny mahita vehivavy mainty miaraka amin'ny kalitao lehilahy mainty, fa tsy afaka miady hevitra amin'ny zavatra izay nampiraisin'Andriamanitra. Firariantsoa tsara indrindra ho anao sy ny fianakavianao amin '
David • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:06 PM • navalin'i
Excellent bilaogy. Handeha aho tsy maintsy mampiasa ny teny hoe “wifing” ankehitriny. amim-panajana, mazava ho azy.
Sean • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:07 PM • navalin'i
Ny vadiko & Izaho dia fotsy… manana isika 3 fotsy ny ankizy sy 1 African zanaka (Ethiopia). Isika mahazo ny sasany amin'ireo fanontaniana sy hafahafa ihany stares, fa fantatsika izahay natokan 'Andriamanitra ho fianakaviana!
Misaotra anao manao ny marina sy ny fisokafana ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainanao… Mino aho fa izay no hevi-dehibe ny lahatsoratra – Mitady ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny tian'ny manokana!
Io foto-kevitra ara-baiboly dia afaka ny ho “dika & napetany” amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainana ny finoana… ary tokony!
jholy • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:10 PM • navalin'i
I mitehaka anao noho ny vonona ny hizara ny “antony” fa manambady ivelan'ny hazakazaka. Ny eritreritra voalohany, tahaka ny olona manambady vehivavy iray any Azia, dia nahoana no tsapanao fa ilaina ny hanamarinana izany na iza na iza. Mazava ho azy, ahy sy ny vadiny’ Toy izany koa hoditra feo, ny fiaviana sy ny fanabeazana ireo dia lavitra hafa, na iza na iza afaka nilaza hoe “Nahoana ianao no hanambady azy?”Rehefa voalaza, vadinao, NO vadiny, NY mpanampy sahaza, ny hafa (raha ny vadiko mamaky, “TSARA”) antsasaky fa Izy dia nanome. Andriamanitra dia mitondra ireo eo amin'ny fiainantsika fa mila manana, mba fanamby antsika mba hahatonga antsika ho tsara kokoa. Koa ahoana raha misy olona toa tsy mitovy amin'ny ahy teo ivelany. Toa anao, tokony ho mitady olona rehetra amin'ny fo Andriamanitra izay mitady ny toetra tsara indrindra misy afaka hanana.
manana • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:18 PM • navalin'i
Great lahatsoratra. Raha ny marina Mino aho fa maro ny Kristianina hafa indrindra ny vehivavy kristianina mpitovo (anisan'izany ny tenako) dia hanambady, na mety efa nivady haingana raha natao hanesorana ny sasany ny marivo hevitra. Vao nanomboka vao haingana aho mba hivavaka amin'Andriamanitra tiako Ora tsara indrindra. Mila matoky ny Ray any an-danitra fa mahalala izay ilaintsika. Ny zava-dehibe indrindra dia tiako ny lehilahy matahotra an'Andriamanitra ary tiako ny fomba U nilaza fa zava-dehibe indrindra supersedes hazakazaka na dia Andriamanitra dia hanome antsika ny fanirian'ny fontsika. Lehibe lahatsoratra N Andriamanitra hitahy
Nicole • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:20 PM • navalin'i
Lehibe asa ny tsy milaza ny tenanao, nefa manao izany amin'ny fomba izay olon-kafa dia hahatakatra. Rehefa manomboka manova ny fomba fijery ny fiainana amin'ny ankapobeny, dia ho hitantsika be dia be ny zavatra “manantena” dia tsy misy ifandraisany amin'ny sitrapon 'ny Ray. Ny akaiky kokoa aminy isika, ny bebe kokoa ny “andrasan'ny” miova satria manomboka nilahatra ny sitrapony fa tsy ny antsika. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao. Ataovy hatrany izay manao ny rahalahiko ao amin'i Kristy. Black, fotsy, na volomparasy, loko tsy mitendry anjara rehefa amin'ny tenan'i Kristy Fampiraisana. Nitondra fitahiana ho ahy tamin'ny mahavariana lehilahin'Andriamanitra, izay nitranga ny ho toy izany koa ny foko, fa mihoatra noho ny zavatra ny olona dia araka ny fony izay rehetra zava-dehibe ao amin'ny boky.
Andrea • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:22 PM • navalin'i
Thanks Trip! Izany dia midika hoe tena Natao ahy ny mieritreritra momba ny tiany sy ny fomba indraindray aho nitandrina ny fitaovam-piadiana tsara halavan'ny sasany fotsiny gents Kosy dia tsy heverintsika ho tsara tarehy. Points ny olana ny fireharehana. Tena nampahery anefa ny fanehoan-kevitra manohana ny volon-koditra ny fifandraisana. Tiako ny fianakaviako nizara ireo fomba fijery. Raha hanambady lehilahy mainty hoditra, dia tsy ho mora.
Jason • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:38 PM • navalin'i
Heveriko fa be fa lasa nijery volon-koditra sy ny foko. Tsy zakako rehefa mihazona izany ary te-hijanona ao ny hazakazaka na inona na inona antony. Isika dia olona samy hafa matoatoa va ny hoditra rehetra, voan'ny fahotana. Ny tovovavy dia Espaniola sy mainty aho fa tsy mijery azy, ka jereo ny vehivavy espaniola, Mijery azy aho, ary jereo fotsiny ny vehivavy, na inona na inona volon-koditra na foko.
MrsHendrix • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:48 PM • navalin'i
Amen. Voatahy aho noho ny valin-. Raha vao manana fifandraisana amin'i Kristy, Ny sitrapony lasa ny sitrapontsika sy ny sitrapony dia ho anao ho vadiny vadinao LOL…. (fa na raha misy dikany). Dia natao azy indrindra ho anareo tany lefitra-versa. Angamba izy mahazo be dia be ny Flack noho ny hanambady ny “mainty” Dude, fa fantatry ny Tompo mihitsy no ny ilaina, dia ny anareo. Katsaho aloha Azy ary ny zavatra rehetra dia hanampy ho anareo (ao anatin'izany ny vady tsara).
Aoka Sambatra ny rahalahy, ary mbola ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa.
Leilani Bailey • Oktobra 31, 2013 amin'ny 3:48 PM • navalin'i
Andriamanitra anie hitahy ny Union Trip.
Misaotra anao nizara ny zavatra niainany.
Ny fanambadiana Andriamanitra fifanekena dia tsy javatra dia avy amin'ny loko na ny firazanany. Ny fitiavana mandrakizay mihoatra rehetra..
Stacy • Oktobra 31, 2013 amin'ny 4:05 PM • navalin'i
Dia faly ianao namoaka ity. Araka ny vokatry ny bi-foko fanambadiana sy ny vadiny ny zanak'olombelona mety tsy hita taratra na azy :) ity lohahevitra ity dia tena tena misy ahy. Andriamanitra Nitahy ahy amin'ny vadiko, Ary Malahelo ahy ny mieritreritra misy ireo avy teo, izay no tsy mety ny zavatra Andriamanitra ho azy ireo noho ny tsi-fahalalana ny / fanavakavahana.
Favorite tsipika: “Ka dia wifed azy.” TPT!
Natalie • Oktobra 31, 2013 amin'ny 4:30 PM • navalin'i
Tena lehibe lahatsoratra, ary Im faly fa misy olona avy no tahaka anao izay manokatra ny resaka momba ny foto-kevitra toy izany, ary ho tena izy izany, satria teo foana toa ny henatra vokatry ny volon-koditra fifandraisana.
Sinoa aho ary ny vadiko mainty, ary ny ady mafy isika efa nihaona eny diantsika miaraka ho sarotra sy tena fitsapana. Nivady izahay tanora tahaka anao, ary ny vadinao, aho 21 ary izy 24. Manana isika 2 vavy miaraka, ary rehefa irery Im avy amin'izy ireo, Aho nijanona hatao eny an-dalana sy ny vahiny ho toy ny “no Daddy mainty?”
Indrindra indrindra ny tolona efa miaraka amin'ny fianakaviako, satria na oviana na oviana aho nihevitra fa hanambady ny lehilahy mainty. Nanana kely iray fampakaram-bady sy ny antsasaky ny fianakaviako tsy nety ho avy. Fa Andriamanitra dia mahagaga satria ny alalan 'ny rehetra izay, Neny ny finoana ny nizahan-toetra sy hotsapaina, toe-tsaina ny fianakaviako ao anatin'ny efa niova. Ny lahy dia nanaiky izao, ary ny Neny dia manaiky azy ho zanany amin'ny lalàna ankehitriny (izay fifanarahana goavana ho antsika!) Mbola misy fomba handeha, Fa mainka dia Nandroso fa hanome voninahitra an'Andriamanitra rehetra. Ataovy izany Trip, ny fitaomam-panahy ianao ho an'ny hafa, ary mivavaka aho mba Andriamanitra dia hanohy hitahy anao, ny fianakavianao sy ny asa fanompoana.
Sal: Mila hidina hanatanteraka in London, UK fotoana!!
LoganSharp • Oktobra 31, 2013 amin'ny 4:38 PM • navalin'i
Tena marina izay nolazainao. Ny vadiko dia Hispanika, Fotsy aho. Hazakazaka tsy tonga tany an-eritreritra ny ahy fa be dia be ny zavatra hoy rehefa nihaona vadinao; Hitako vadiko ny fitiavany an'Andriamanitra, ny faniriany hanao fanompoam-pivavahana ny mpianatra ary nahafinaritra be dia be toy izany koa ny filma sy ny mozika ary nivavaka ho an'ny tsirairay mandritra ny mampiaraka. Tsy azoko hoe nahoana ny olona no mihevitra ny fanambadiana volon-koditra “hafahafa”.
Misaotra mizara izany amin'ny mpankafy sy ny manome fampaherezana.
Natasha • Oktobra 31, 2013 amin'ny 4:39 PM • navalin'i
Izany no awesome! Misaotra anao noho fizarana lavitra. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy tian'ny manokana fa ny famonjena. Youre tantara dia fitahiana.
LeonMartinez • Oktobra 31, 2013 amin'ny 4:41 PM • navalin'i
Beautiful fijoroana ho vavolombelona! Marina izany niteny tamiko ary na dia efa tsy nanana na inona na inona volon-koditra na tian'ny toy izany, mbola nanome toky ho ahy fa Andriamanitra dia hanome izay ilaintsika, tsy voatery te. Ianao dia tena aingam-panahy sy ny fijoroana ho vavolombelona velona ny fiainana-manova ny herin 'Andriamanitra. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fam kely tsara tarehy!
Reewantae • Oktobra 31, 2013 amin'ny 5:01 PM • navalin'i
mahagaga lahatsoratra, Trip! Voalohany Commenter eto!
Ny sisa ianao rehefa milaza hevitra, “Tsy mbola te lanja ny tiany ho vadiny noho izay nilaiko tao vady.” Indraindray, Odian-tsy hita aho mahatsiaro ho toy ny vehivavy, satria ny toetrako sy ny toetra dia fomba iray. Aho izay mety hoe “hafahafa” na “samy hafa” araka ny maro ny olona fantatro. Misy ry zalahy toy ny tovovavy izay no kely mahazatra kokoa ho lamaody na olona iza no kely kokoa ny ara-tsosialy sy sahy hiteny noho izaho. Amin'ny fotoana hafa, Mino aho fa angamba aho tsy misy manao ny tenako noho ny kely manokana manavaka hevitra. Ireo fomba ireo dia tsy mifototra amin'ny hazakazaka, fa bebe kokoa amin'ny olona iray fiaviana, na ny fomba fitaterana… satria mitaingina ny fiara fitateram-bahoaka an-tsekoly, ary tsy mankasitraka izany raha misy lehilahy manadala ankizilahy miezaka amiko eo amin'ny fitateram-bahoaka. (Ny hevitra dia ny hoe raha toa tahaka ny lehilahy nitaingina ny fiara fitateram-bahoaka na ny fiaran-dalamby, ianao tsy afaka ny hahazo fiara, ary ny iray, manana kely no mandany vola, na eo amin'ny zavatra ratsy, ka noho izany dia tsy miezaka ny hiresaka draharaha mamy ho ahy. TPT… fa izany koa diso.) Nivavaka aho fa hanampy ahy ny Tompo mba hijanona eo ny sitrapony ho ny fiainako, ka rehefa tonga ny fotoana dia nisy olona mba hahitana ny “zavatra tsara,” Ho tonga toa vonona. :)
Jona • Oktobra 31, 2013 amin'ny 5:25 PM • navalin'i
I tanteraka hazakazaka manaiky fa tokony ho iray amin'ireo tanana mivelatra safidinao, fa tsy manaiky fa, na hafa 'safidinao’ ny dikany rehefa mifandray amin'ny fifanoherana. Indrisy, amin'ny traikefa, ny zavatra tsapako novohana tian'ny tanana, ary nitolo-batana izany manohana ny an'Andriamanitra eo anatrehako,,Nanjary loharanom-olana lehibe eo amin'ny fanambadiana, taona maro taty aoriana, rehefa nahazo ny vadiko alot ny lanja, teo an-tampon'ny izay efa heverina i matavy endriny. Foana aho no nahasarika ny karazana fanatanjahan-tena bebe kokoa, Rehefa niatrika aho lanja kokoa tombony, Ekeko, Ara-nofo aho atsahatra. Izany dia nitarika ny ady, ary ny ady nanao ny safidiny ho tendrombohitra. Raha tokony ho tsotra ara-batana tian'ny kely nasiako manohana ny sary lehibe kokoa ny mahafinaritra lehilahin'Andriamanitra izy, ny ady izahay manana ny momba ahy dia tsy ho mafana fo momba ny firaisana, Niteraka fihetseham-po izay 'nanome ny’ zavatra izay manan-danja sy ilaina tangibly, ary ankehitriny dia niatrika voatery ho ny fanaovana adidy amin'ny mpiara-miasa sy be fitiavana ny olona iray firaisana ara-nofo Tsy hamaly ny ara-batana. Ihany ny fahasoavan'Andriamanitra no nitondra antsika amin'ny alalan'ny hatreto, fa, amim-pahatsorana, ny tenany dia mbola lehibe lavitra kosa, ary mbola maniry aho no nihantona hatrany ny safidiny, ary niandry olona iray izay mifanaraka ny karazana ara-batana, ary koa fa mila ny vadiny araka an'Andriamanitra
Maddy • Oktobra 31, 2013 amin'ny 5:26 PM • navalin'i
ary, fa te hanambady anao. Tsara ho anao ihany. Ratsy ho ahy..
SheilaTurner • Oktobra 31, 2013 amin'ny 5:28 PM • navalin'i
Amin'ny maha-maro-Nihazakazaka olona, Izaho no nanaitra ny ankizy mba hijery ny toetra ny olona iray rehefa mifidy sipa / ankizivavy, ary tsy momba ny volon'ny hoditra. Noho izany dia mitondra ny datin 'ny olona avy amin'ny firazanana rehetra, sy efa tratran'ny kolontsaina maro. Ny fanehoan-kevitra foana raha toa ka hitondra azy ireo amim-panajana sy tia azy ireo, Zinona moa aho hilaza aminao fa tsy afaka ny ho amin'izany olona mifototra amin'ny volon-koditra.
Tsy maintsy milaza fa ny toerana tena ampahany ity bilaogy ity no fanambarana ity eto, “Tsy mbola te lanja ny tiany ho vadiny noho izay nilaiko tao vady.”
Izany zo izany dia mamintina azy!!!!
Eric • Oktobra 31, 2013 amin'ny 5:42 PM • navalin'i
Vaovao tsara! Tsy izy na dia “fotsy”! Ary aza dia “mainty” Trip. Ireo teny ireo fandriana. Derao Andriamanitra isika rehetra iray firazanana Adama. Na dia samy hafa foko, mihavana isika ao amin'i Kristy! Amen Bro. tsara lahatsoratra. One ra. One Zanaka.
Jessica • Oktobra 31, 2013 amin'ny 5:49 PM • navalin'i
Awesome! Misaotra noho ny nanoratana ity. Ianao toy izany fampaherezana, ary hidera an'Andriamanitra misy mpivady araka an'Andriamanitra tahaka anao sy ny vadinao avy any. koa, Azoko antoka fa miara-, ianao dia afaka tonga be dia be kokoa noho ianao ny olona ho afaka ankoatra. Ataovy reppin Jesosy.
miresaka momba: Nahoana no nanambady fotsy Girl amin'ny Trip Lee | 9jagirl4real
Leesa • Oktobra 31, 2013 amin'ny 6:03 PM • navalin'i
Izany no izy, mahatahotra ny mamaky! tena nampahery. Izaho efa nataonareo tamin'ny disppointing sy ny fanehoan-kevitra rasist. Ny vadiko dia sady fotsy mainty aho. Samy avy any tanteraka diffrent tontolo. Tsy mbola nieritreritra aho ivelan'ny hanambady ny hazakazaka. Vainly nivavaka mihitsy aza aho fa Andriamanitra no nahita Ahy mainty lehilahy dreads LOL. Misaotra an'Andriamanitra anefa aho tenany nahalala izay tao tsara indrindra ho ahy sy ny fitahiana tsy tamin'ny fotsy hoditra fotsiny afa-tsy ny mpanjaka eto an-tany! Koa satria efa nivady izahay dia efa tena nahalala ny dikan'ny hoe tia amin'izao etỳ an-tany. Tsy mba hilaza rehetra biz fa efa miady mafy amin'ny olana sy ny fiterahana Misaotra an'Andriamanitra aho noho ny vadiko, satria efa foana hampahery ahy. Tianay ny mozika sy ny asa fanompoana. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao!
kaileybrown • Oktobra 31, 2013 amin'ny 7:27 PM • navalin'i
Fotsy aho, ary ny vadiko mainty. Rehefa mampahafantatra azy ny ankamaroan'ny olona miandry mandra-miala hoe “dia isnt zavatra andrasana!!” dia nampiasaina mba ho ahy very saina. Like, izay moa ianao no hitsara ny fanambadiana. Ankehitriny dia mampiaka-tsoroka fotsiny ka hanao hoe: “dia wasnt izay andrasana na, fa Izaho no mahalala 100% fa izy no ilay Andriamanitra naniraka ho any amiko” ny tsara ho fantatra ny aproach. Ary vao mahalala ny tena mpankafy hoe nahoana izy no vadinao.
Taylor • Oktobra 31, 2013 amin'ny 7:37 PM • navalin'i
Izany “Martin” Comment no ahy nikodiadia teo amin'ny tany Laughing…Tena mahatsapa aho fa ity Blog manontolo!! Ny olona mijery ivelany sy Andriamanitra mijery ny fo. Nanonona matetika ny vadiko fa am-po Ny womans dia tokony ho toy izany miafina ao amin'Andriamanitra. Fa ny olona dia tsy maintsy hitady azy, mba tena hahita azy…
Jake • Oktobra 31, 2013 amin'ny 7:51 PM • navalin'i
Ireo rehetra izay efa natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy, tsy misy intsony na Jiosy na Grika, Scinthian na barbariana. Izany no nambara ny fahamarinana ao amin'ny soratra masina, na izany aza, mpino maro mbola manana “unrenewed” saina izany. Nahoana foko no mbola olana. Dia mbola mihetsi-jaza efa lehibe amin'ny fiterahana mandra-paharin'i Kristy namorona antsika rehetra.
Pamela • Oktobra 31, 2013 amin'ny 7:53 PM • navalin'i
teny soa! Ny fitiavana ny fianakaviana pics. fitahiana!
Leesa • Oktobra 31, 2013 amin'ny 7:54 PM • navalin'i
Tsy manambady aho, fa mbola be dia be ny havanay ary dia manambady ny olona avy amin'ny foko samy hafa avy amin'ny manerana izao tontolo izao. Tena mba mangatsiatsiaka fa fianakaviana azo natao tamin'ny hoditra maro samy hafa loko. Volon-koditra Heveriko fa tsara tarehy loatra fanambadiana satria mampahatsiahy antsika fa isika zanany rehetra namorona fomba tsy miangatra sy tsara. Ny Tompo dia mijery ny fo, ary tokony hanao toy izany isika, toy ny olombelona sy ny tantaram-pitiavana ao amin'ny namana ny fifandraisana.
IAMDJLADYJ • Oktobra 31, 2013 amin'ny 7:54 PM • navalin'i
Izany ara-tsindrimandry ka nitso-drano ahy tamin'ny fomba maro. Tiako ny mahita volon-koditra mpivady / fanambadiana! Izany dia midika hoe foana ny faniriako ho toy ny vehivavy mainty hoditra mba hanambady ivelan'ny ny hazakazaka. Tsy andriko ny andro izay mihaona amiko ny vadiko satria fantany dia naka tanana ka natao ho ahy! Manana mba hahazoana izany toerana mihoatra noho izay rehetra hafa izay mitodika amin'Andriamanitra, ary hanaiky izay rehetra ho antsika Manana. Antoka tsy maninona ny mangataka amin'Andriamanitra na hilaza ny zavatra tianao na toy ny U. Mihady izany, dia efa fantany. Mbola tsara kokoa Fantany inona no tsara indrindra ho antsika. Noho izany tsy maintsy hahatsiaro ny zavatra angatahintsika na mivavaka ho an'ny. Inona U te Tsy foana ny zavatra mila U! Matokia an'Andriamanitra ny fangatahanareo, ho fantatra sy mamela Azy hanao izay zavatra atao!
AmandaB • Oktobra 31, 2013 amin'ny 8:05 PM • navalin'i
Tena faly aho no nanambady an'i Jessica. Izy dia mahagaga ny olona miaraka amin'ny fo mahagaga. Ianao manana mahagaga roa fitaomana ny olona ho toy ny mpivady izay-pitia samy izy sy i Jesoa. Fotsiny misaotra betsaka anao mandray mijery ny fo fa tsy ny loko ny tavanareo.
Paula • Oktobra 31, 2013 amin'ny 8:23 PM • navalin'i
Trip, rehetra azoko lazaina dia tsara, tsy ahafahan'ny teny maneho ny fifaliana ao rehefa mizara toy izany ianao mangarahara mikasika ny antony nanambady ny vadinao, Izany dia tena ka te-hanampy ireo mahita avy amin'ny fomba fijery hafa sy izay mety nanenjika ny fanambadiana amin'ny ho avy. Andriamanitra no tena mahalala izay tsara indrindra ho antsika. Enga anie ny Tompo hitahy ny fianakavianao hanohy!
atiya • Oktobra 31, 2013 amin'ny 8:25 PM • navalin'i
tsara tarehy & mahagaga….
dmoney • Oktobra 31, 2013 amin'ny 9:00 PM • navalin'i
Trip, misaotra anao noho ny fitoriana ny fahamarinana ny diso hevitra momba antsika sy ho ahy manokana. mainty aho na dia im sary foana ny tenako amin'ny olona tsy mitovy firazanana. fa Andriamanitra no tsikelikely rehefa mifandray amiko ho fanekena avy amin'ny foko rehetra ary ny zava-dehibe dia ny fony mampiseho ny an'i Kristy. Thats zava-dehibe indrindra. Plus ianao manana ny feno fitiavana sy fanohanana ny fiangonana an-trano. isika dia feno ny biracial mpivady sy ny ankizy mifangaro. miampy efa maro mifangaro namana fa ny firenena overrunning LOL. Ireharehako ianareo noho ny mijoro ka milaza amin'izao tontolo izao ny zavatra ilain'izy ireo ho heno :)
SP • Oktobra 31, 2013 amin'ny 9:09 PM • navalin'i
Tia namaky ity lahatsoratra ity, Trip. Tsy mamely akaiky ny an-trano. Aho amin'ny volon-koditra koa ny fanambadiana. Mainty aho (Jamaikana, Indianina any Amerika, ny razambeny dia afaka mandeha) ary ny vadiko hongariana, alemaina, sns-dia tahaka izany koa ny fotsy. Foana aho Fantatro fa tsy hanambady lehilahy mainty hoditra, ary tsy fantatro izay ho avy hazakazaka ny vadiko ho. Koa tahaka anao, Nandeha tany amin'ny oniversite tsy te hampiaraka, fa mba hitombo ho toy ny mpanara-dia an'i Kristy-hahazo ny fanabeazana sy nihaona ary raiki-pitia tamin'ny lehilahy fotsy tanora manokana.
Rehefa nanomboka niaraka, volana vitsivitsy tao izahay, nahafantatra izahay hanambady indray andro any ary nanao araka izay taona vitsivitsy tatỳ aoriana. Aho no nanana tombontsoa ampy mihalehibe any amin'ny faritra isan-karazany, ary manana olona ao amin'ny fianakaviana izay ao amin'ny volon-koditra koa ny fifandraisana toy izany, ny volon-kodiny na oviana na oviana phased ahy. Nahita azy aho noho ny hoe iza izy; Nohazavain'ny mpanompon'Andriamanitra iray izay fony feno fitiavana, ny fanetren-tena sy ny hatsaram-panahy. Dia lasa nijery ny volon-koditra ihany koa, mijery ny foko ka nahita ahy fa iza aho ny anatiny. Tsy misy isalasalana fa nitondra antsika hiara-. Tsy ho tanana-naka vady tsara kokoa ho ahy amin'ny andro rehetra nomena. Eny, Mba nanana ny tiany koa raha ny zavatra tiako ny vadiko ho, fa ny marina dia, Andriamanitra tokoa no nanome ahy be mihoatra noho izay mendrika sy ny sisa mainka fa Tsy fantatro mihitsy mihitsy aza aho te.
Misy fotoana maha mpivady ny volon-koditra toa hafahafa amin'ny toe-javatra sasany, fa fotoana farany homarinana avy amin'ny teny-isika rehetra ra mitovy loko.
Jeffrey • Oktobra 31, 2013 amin'ny 9:34 PM • navalin'i
“Tsy misy na inona na inona voatery maharatsy ny manana safidinao, fa tsy maintsy mihazona azy amin 'ny tanana mivelatra.” Lehibe notsongaina isaky ny fihadiana ny fiainana!
MarcosJackson • Oktobra 31, 2013 amin'ny 9:46 PM • navalin'i
Misaotra anao noho ny famoahana izany! Tiako ny manao ny marina sy ny mangarahara. Andriamanitra anie hitahy ny, dia ny anareo!
Melodye • Oktobra 31, 2013 amin'ny 9:57 PM • navalin'i
Faly aho ho an'ny olona izay vonona ny hihaino an'Andriamanitra mihoatra noho ny fiaraha-monina eo amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana sy mamela ny sainy mba hitovy ny sitrapony sy ny fomba. Mihevitra aho fa matetika tsy manao tonga saina ny boaty sy ny masontsivana fa mametraka ny tenantsika. Miaramila ny fianakaviako dia toy izany no efa nisy colorblind amin'ny ankapobeny mihalehibe rehetra. Na izany aza teo amin'ny tany atsimo sy ny fitsaratsaram-poana tiany hanjaka ambony indrindra, matetika… Mihitsy aza aho dia nanana namana akaiky tany amin'ny oniversite bandy milaza amiko fa izaho no tena tsara tarehy, manan-tsaina, mahagaga zazavavy izy Te mbola fantatra fotsiny nefa tsy nihevitra izy Te mampiaraka ny ___( ampidiro eto hazakazaka eto)___ ankizivavy. Nandratra ny foko. Hah ary tsy dia tia azy toy izany. Faly aho no namela-tena raiki-pitia, ary ireo kosa mankatò fanokafana ny tantara ho amin'ny olon-kafa.
Jason • Oktobra 31, 2013 amin'ny 10:43 PM • navalin'i
Numbers 12:1-11…Tsy ilaina ny hanamarinana ny tenanao ho olona Bro, mitady ny misehoa ankasitrahana ho an'ny Tompo. Fo madio & fahatokiana manoloana ny Tompo Jesosy dia hanafoana ny anjara-raharaha rehetra na teny misy olona afaka spek hamely anao.
kangstawillz • Oktobra 31, 2013 amin'ny 11:15 PM • navalin'i
Yo dalana enao no man.I koa no same.lol.I dia hanambady ao amin'ny Tompo sy ny volon-koditra hazakazaka,e.t.c dia tsy zava-dehibe raha mbola izy araka an'Andriamanitra hitahy U one.GOD olona.
Lindsey • Novambra 1, 2013 amin'ny 12:00 aho • navalin'i
Ny ka mampahery ny mamaky izany. Fotsy aho, ary ny vadiko mainty, ary miaina ao anaty ny ankamaroany manodidina Hispanika. Manana isika 2 tovovavy tsara tarehy fa Azonao an-tsaina no mahazo alot ny tarehiny. Ny ny fianakaviana dia afaka ny ho tsara tarehy ratsy indraindray. Fa ny tena zava-dehibe dia efa nianatra dia ny hoe na dia misy fahasamihafana ara-kolontsaina (indrindra rehefa manangana ny ankizy), ny zava-dehibe indrindra dia ny hiaro ny fontsika sy ny faniriantsika amin'i Jesosy.
FortuneLawrence • Novambra 1, 2013 amin'ny 1:20 aho • navalin'i
Dia voatahy aho noho ny hafatra Trip!
Manana fanontaniana aza. Izaho no Afrikana(mainty) Aleoko ramatoa ary fotsy ho mainty ry zalahy. Izany indrindra satria aho tsy dia mahazo aina amin'ny sasany amin'ireo fomba amam-panao ao an-trano ny firenena. Tsy maintsy hoe, Tiako mainty olona be dia be, fa toy ny nolazaiko hoe:, ny firenena manana mahatsikaiky ny sasany finoana. Ve ianao hoe diso aho amin'ny fanaovana toy izany tiany?
Julia • Novambra 1, 2013 amin'ny 1:53 aho • navalin'i
Great lahatsoratra Trip. Tiako ny zavatra nolazainao momba ny hazakazaka tsy maha olana. Fotsy aho, na, fara fahakeliny, mijery izany ny ankamaroan'ny olona. I notezaina tao amin'ny biracial an-trano…Neny dia italianina sy ny Hispanika sy ny raiko dia fotsy. Amin'izao fotoana izao aho niaraka mahafinaritra lehilahy mainty hoditra izay tsy manana olana amiko satria tsy mitovy hazakazaka tahaka azy. Hitany ahy ho tsara tarehy. Black vehivavy amin'ny lafiny iray hafa mahita ahy ho toy ny loza mitatao. Izy ireo ihany no mahita ahy toy ny fotsy…raha nahalala ny marina ihany. Tsy tokony mampaninona izay firazanana hianareo rehetra izay zava-dehibe dia hoe olona 5Ary U hanambady isan'ny mino koa. Misaotra indray ny lahatsoratra.
Daniel • Novambra 1, 2013 amin'ny 6:27 aho • navalin'i
Nahazatra ahy ny hampiasa andinin-tsoratra masina mba hanakivy izany karazana fanambadiana. “I Adama sy Eva no tena mety izany loko / Samsona azy ny dadanay te hanambady olona avy any amin'ny zanak'i Israely / Isaka ny dadanay nandeha mafy mba hitady vady tsy ho eo 'ny vahoakany’ ho an'i Isaka, sns…”
Ny fifanakalozan-kevitra momba ity lohahevitra ity dia ratsy toetra, spotty ary - tena tamim-pahatsorana - marim-pototra.
Ary avy eo dia nanova ny foko Andriamanitra ka nanao ahy tao amin'ny toe-javatra izay tsy nanana safidy afa-tsy ny miantehitra aminy. Nampianatra ahy zavatra izany dia hatoky Azy. Ary izany rehefa nanomboka tsiny ireo manodidina ahy izay matoky Azy koa. I mby akaiky kokoa ny vahoakan'Andriamanitra - na inona na inona kolontsaina fototra - ary raiki-pitia tamin'ny mpianany noho ny fahasoavana, finoana sy ny fitiavana dia naneho.
Ary izany no niafara Amerikana io hanambady tsara tarehy, araka an'Andriamanitra tovovavy Breziliana. Efa ho 10 volana ary Andriamanitra efa nampianatra antsika na be dia be! Efa ho hanitra fifandraisana izay efa hita hatrany hatrany: Ny lalan'Andriamanitra no tsara indrindra, Raha ny foto-pisainana efa-pitsapana.
Tracy • Novambra 1, 2013 amin'ny 8:05 aho • navalin'i
Efa ela aho no nanontany tena ny fomba ny ankizy mahatsapa hoe mifangaro. Fantatro ahy aho te ho tanteraka firazanana iray, na ny hafa. Dia tsy zava-dehibe izay, Sinoa, Eskimo, Indian sns. Izany dia fanontaniana aho, tsy mbola nandre niresaka.
ELVISNIXON.com • Novambra 1, 2013 amin'ny 8:17 aho • navalin'i
Hongroà no Magyars. Magyars dia lineal taranak'i Attila ny Hun (noho izany ny teny hoe Hongroà) izay matetika antsoina hoe ny “Mongol miaramilany” -Attila dia mbola iray amin'ireo malaza indrindra any Hongria zazalahy anarana- tahaka ny Arpada- Ary noho izany dia,ara-teknika, Asian.
Koa vao mainka ianao samihafa / kolontsaina maro noho ianao nieritreritra!
RyonFreeman • Novambra 1, 2013 amin'ny 8:32 aho • navalin'i
BrendaF • Novambra 1, 2013 amin'ny 8:37 aho • navalin'i
Izany no awesome! Ny hazakazaka amim-pahatsorana na dia tsy tsindrio raha amiko mandra-nahita ity lahatsoratra ity. Aho mainty sy ny antsasaky ny lehilahy no mainty sy fotsy (na dia toa Hispanika) ary mahazo vazivazy ny fotoana rehetra amin'ny olona milaza fa tsy tiako mainty ny olona. Oh ary aza tsy havelany hahita ny ankizy. Bol! Tsy azo atao mihitsy ny maka roa sosona. Efa nanambady 7 taona ary mbola mampihomehy mandraka androany. Andriamanitra anie hitahy ny fianakavianao ny olona!
TamaraC • Novambra 1, 2013 amin'ny 8:41 aho • navalin'i
Amen! Misaotra anao! Ny fijoroanareo ho vavolombelona mandeha rehetra manerana izao tontolo izao… Ny olona izay mila. hotahian'andriamanitra anie ianao!!
Hafatra avy any Alemaina, Eoropa!
Keinya • Novambra 1, 2013 amin'ny 8:44 aho • navalin'i
Ankasitrahako tokoa ity lahatsoratra ity. Aho amin'ny volon-koditra sy ny fanambadiana ihany koa izaho sy ny vadiko samy manana ny fomba hafa momba ny olona izay mety mahafantatra antsika sy hahatsapa toa izy ireo mahafantatra antsika tsara tarehy toa mianatra ny inona ny vadinao toa, na amin'ny raharaha mahita sary ny ankizy (satria nahazo nandalo ny maso ihany mandra-fantatrao izy ireo mainty anjara dia mety ho endri-javatra kely sasany hisambotra) ary niaraka tamin'izay dia azo inoana dia tsy maintsy mahita tsy manana dada mainty ary izay ny fanantenana. koa, ny ankizy hiteny misosa tsara teny vahiny mba tena Mampifangaro ny olona hatramin'ny farany ny atao hoe Lawrence. Misy tantara iray ao ambadiky izany koa satria metisy koa (tsy mainty fotsiny). Na izany na tsy, Tiako ny zava-misy fa nikasika izany, satria ho an'ny sasany, fa toy izany fifanarahana lehibe ary na dia miady toy ny misy mafy fitaoman foko sy ny fanerena eo amin'ny izao tontolo izao (haino aman-jery, ireo olon-tiantsika na dia, namana, etc.). Ny fihetseham-poko ny fiaraha-mientana ifampizarana ho anao sy ny maro hafa izay naneho hevitra. Misaotra anao!
Keinya • Novambra 1, 2013 amin'ny 8:48 aho • navalin'i
Fa momba izay ihany, Tiako ny hira “zava-tsoa” momba ny vadiny. Tena tsara tarehy izany, ary mahatonga ahy hieritreritra ny fifandraisana manokana. Thx ho an'ny mozika lehibe koa! :)
Logan • Novambra 1, 2013 amin'ny 9:17 aho • navalin'i
TIAKO “Robot”!!! Handeha aho ho mandihy taminy noho ny fetibe.
Michael • Novambra 1, 2013 amin'ny 9:37 aho • navalin'i
“Ka dia wifed azy.” Mangalatra aho fa.
TylerDouglas • Novambra 1, 2013 amin'ny 9:53 aho • navalin'i
Avia ON!!!!! Aho Caucasian, ary na dia efa nahita ny tantara rehetra Martin
Debbie • Novambra 1, 2013 amin'ny 10:08 aho • navalin'i
Tena faly aho hamaky izany ary mahita fa ny hafa mizara ny fihetseham-po toy izany koa manoloana ny fanambadiana sy “hazakazaka”, TAHIN'ANDRIAMANITRA!
Jason • Novambra 1, 2013 amin'ny 10:35 aho • navalin'i
1 Samuel 16:7…Ny Tompo mpitsara avy ao am-po, koa nahoana isika no dont? Tokony hanao zavatra ny Tompo dia nilaza ny fenitra, ny nofo tsy izay tian'ny / na ny fitsipika avy amin'izao tontolo izao. Raha izany dia, avy amin'ny fomba fijerin'ny olona, ny fitsipika momba ny vady ny Ohabolana toko faha- 31, tsy hoditra feo / tsy ny tontolo ity fari-manambady ao an manokana “hazakazaka / foko.”
tabby • Novambra 1, 2013 amin'ny 11:20 aho • navalin'i
Dude izay awesome!
Tony • Novambra 1, 2013 amin'ny 11:31 aho • navalin'i
I mankasitraka izany aho satria Afrikana Amerikana sy ny vadiko dia Hispanika. Ny hazakazaka dia tsy toe-javatra ho ahy, noho ny am-pony ho an'ny Tompo. Isika izao hanan-janaka zazavavy. Rehefa mijery mivady sy ny zanany vavy tsy hitako ny vehivavy Hispanika, na samy hafa firenena zaza. Vao mahita roa ireo fitahiana lehibe indrindra teo amin'ny fiainako (afa-tsy ny Tompo Jesoa). Indraindray aho dia manadino fa izahay dia ny volon-koditra mpivady sy ny fianakaviana. Tsy mora mihitsy ny fotoana rehetra noho ny olon-kafa, Fa tsy tiako tsy ho izany fomba hafa. Enga anie ny Tompo hitahy anao hatrany sy ny fianakavianao!
Andrew • Novambra 1, 2013 amin'ny 1:09 PM • navalin'i
Trip, misaotra betsaka anao mandray izany. Fotsy aho, ary avy any Cincinnati ary izay itoerako nitombo matetika aho ny zanak'osy ihany no fotsy eo amin'ny andian-tsoratra. Ny vadiko efa samy hafa tanteraka ny fomba nitaizana. nihalehibe izy any ambanivohitr'i Nebraska ho toy ny Meksikana. Tsy afaka na dia hanomboka ny manazava ny sasany amin'ireo tantara izy no milaza amiko fa ny sy ny rahalahy maintsy mitombo miaraka noho ny fankahalana, fitsaratsaram-poana, ary ny tsy fahalalana fisaka avy amin'ny olona izy notezaina teo.
Dia nifindra tany amin'ny Nati ho akaiky ahy. Nifindra tany izy nieritreritra izy fa tsy hametraka ny amin'ny, mihainoa, na hiaina ny zavatra lasa izy amin'ny alalan'ny mitombo ny. Wow, dia samy tohina izahay! Ny zavatra olona hoe isika ao amin'ny tsenambarotra, tao amin'ny valan-javaboary, na fotsiny avy hihinana. Ianao no mihevitra fa teny amin'ny fampisehoana, “Inona no hataonao.” Tena sarotra, foana ny fitiavantsika antsika mahery, ny namana nanana ny niverina, ary ny Andriamanitra antsika niaraka foana.
Isika ankehitriny no nivady 11 taona manana 4 tsara tarehy ny ankizy mba hampisehoana azy io. Koa isika ankehitriny, miaina amin'izany tanàna kely ambanivohitra izay nihalehibe izy. Ny fankahalana dia tsy, fa ny tarehiny mbola misy. Ny zavatra foana isika hoe / atao isaky ny mahatsapa ireo “fanafihana” dia manainga ireo izay “manafika” antsika amin'ny vavaka. Ny Baiboly miresaka momba ny fitiavana ny fahavalonao tahaka ny tenanao, ary na dia tsy mihevitra ireo olona ireo mba ho ny fahavaloko, ny foto-kevitra ao amin'ny Soratra Masina dia mbola mitovy.
Love, fotsiny isika, mila maneho fitiavana ny rehetra. Tsy misy manan-danja ny hazakazaka na ny mombamomba ny olona, Andriamanitra dia tia azy ireo, ary isika no ho tahaka ny an'i Kristy, toy izany koa isika dia tokony ho tia azy ireo.
Azazela • Novambra 1, 2013 amin'ny 1:58 PM • navalin'i
Mahagaga lahatsoratra Trip Lee. Ary mbola mpitovo aho fa hatramin'ny naha kely efa tia hanambady vehivavy fotsy noho ny dadatoa roa natao nanambady vehivavy fotsy. Rehefa natao voavonjy aho, tsy nahita na samy hafa ny mainty na ny fotsy, fa raha mbola isika mampihatra ny finoana.
Andrew Almond • Novambra 1, 2013 amin'ny 2:39 PM • navalin'i
Mahagaga Lahatsoratra Trip. Foana aho sahirana be vao haingana amin'ny mampiaraka fanontaniana toy ny hoe iza no tokony mampiaraka, ary rehefa, ary nahoana, sy ny fomba miandry an'i Jehovah namaky ilay zavatra vao haingana, ary Ity lahatsoratra ity dia tena mahay. Misaotra ny fizarana.
Jenna • Novambra 1, 2013 amin'ny 2:43 PM • navalin'i
mahagaga lahatsoratra! Trip, tsara tarehy manana fianakaviana, ary Misaotra anareo aho noho fizarana ny fonao. Na dia izaho sy ny vadiko dia samy fotsy, dia nihalehibe tena amin'ny fomba hafa. Izy no iray firenena marina zazalahy sy tena nanambara redneck. Nahafinaritra ahy foana aina kokoa manodidina ny mainty hoditra, na dia ho toy ny ankizy kely. Na oviana na oviana aho manohitra ny fanambadiana ny fotsy hoditra, fa ny safidinao dia tena Mitarika tsikelikely amin'ny olona ankasitrahany ao amin'ny hip-hop kolontsaina. Matetika ny olona no manontany antsika ny fomba tapitra miaraka, ary ny ankamaroan'ny olona Tohina ho fantatra ny vadiko fotsy. Tsy zavatra efa envisioned ho ahy mihalehibe, fa ny zavatra rehetra nilaiko tao amin'ny vady sy ray ho an'ny ankizy. Ny Tompo dia tena nitahy ahy, ary azoko sary an-tsaina ny fiainako tsy misy lalan-kafa!
miresaka momba: The List | Relationship Resource Kit
RG • Novambra 1, 2013 amin'ny 3:31 PM • navalin'i
Tsy misy intsony ny fonao, na tian'ny fa izay efa nikasa / doha. Tena mahavariana ny fomba ilay hery Fa aseho. Izaho no Indianina any Amerika, izay nihalehibe amin'ny famandrihan-toerana sy ny vadiko Meksikana. Samy lehibe tao fanjakana samihafa kanjo isika kosa nino ny iray ihany Andriamanitra Fara Tampony izay sitrak'Andriamanitra izay naniry ny hanompo Azy sy nanao fandaharana ho antsika mba hihaona. Isika ankehitriny miaina akaikin'ny famandrihan-toerana ao an-tokantranoko fanjakana. nivavaka aho (ho toy ny vaovao amin'ny Kristianina ny taona 8) fa Andriamanitra dia hampiasa ahy ao an-trano ny fiangonana, ary na oviana na oviana aho dia fantatro fa Andriamanitra dia hitombo ahy ho any amin'ny Mpitandrina ny vadin'ny hoy ity fiangonana! Na izany aza, Voatahy aho ny mahafantatra fa mahery ihany io Andriamanitra izay nahary an'izao tontolo izao koa afaka mampiasa antsika ny hafa haneho fitiavana sy fahasoavana lehibe. Ho avy miaraka ilany vadiko ho toy ny mpanampy mba hizara ny filazantsara ny fireneko.
Izany no fampaherezana lehibe ho ahy. Ary ny lehibe ny mandre hoe ahoana no afaka manova ny fo mba hanao ny sitrapony! Tohizo ny hanao ny asany!
Misaotra anao noho ireo hira sy ny fahamarinana no mampiditra. Ny fianakavianay tia ny mozika. Indrindra fa ny mbola zatovo lahy.
halfNhalf • Novambra 1, 2013 amin'ny 3:32 PM • navalin'i
Ny lehilahy no Meksikana, ary aho Filipiana. fantatro 3 fiteny ary ny fianarana vitsivitsy kokoa. Namako akaiky indrindra ny mainty sy ny lahy? Arabo. Tena mahavariana ny mahita mifangaro ny foko amin'ny fiangonana, ary na dia ao vondrona.
Tena no mijery fotsiny ny votoatin'ny ny toetra iray. Tena milamina ny mianatra tenim-pirenena, ka jereo ny tsara tarehy rehetra kolontsaina. Ao amin'i Kristy tsy misy Jiosy, grika, Lahy na vavy.
Matt • Novambra 1, 2013 amin'ny 4:06 PM • navalin'i
Anankiray amin'ny mahamenatra kokoa “safidinao” mitady hiverina ho an'ny vadiko mba ho Denver Broncos mpankafy.
Soa ihany, Andriamanitra dia namela ahy mba hitombo amin'ny fahamatorana fony izy tsy mbola nitondra ny stunner amiko.
Maria • Novambra 1, 2013 amin'ny 4:13 PM • navalin'i
Fotsy aho, I nahazo bevohoka, taona voalohany am-pianarana miaraka amin'ny mpitsabo mainty zaza Mans. Tamin'ny telo volana bevohoka, Andriamanitra efa nampandeha ahy ny namana – ny mainty Indian lehilahy. Na izahay mpitsabo vao manomboka ny asa an-tsekoly. Inona no efa saika hanao dia adala ampy. Rehefa nilaza tamin'ny ray aman-dreniny ny momba ahy izy ireo nandrahona ny hanaisotra ny fanohanana, ny rahalahiny tsy nety niteny tamiko. Rehefa afaka herintaona sy tapany izahay no nivady mbola any am-pianarana, mitaiza ny zanany, ary mbola ho sahiran-tsaina ny olona. Andriamanitra no tena tsara, amin'ny iray amin'ireo fotoan-tsarotra indrindra teo amin'ny fiainako, dia nomeny ahy ny namana, Nohazavain'ny mpanompon'Andriamanitra iray, ny ho tia ahy, rehetra aho, ahy + zazakely. Haresa ny tena lehilahy. Haresa ny tena be fitiavana sy tsara fanahy Ray.
Aleshia Robinson • Novambra 1, 2013 amin'ny 4:48 PM • navalin'i
Izany no nihatsaravelatsihy fa rehefa mahita ny volon-koditra aho mpivady eny imasom-bahoaka Mihevitra aho fa na inona na inona izany, afa-tsy rehefa mahita Black lehilahy iray tsy Black ankizivavy. Tsy dia tafintohina raha ny mifamadika amin'izany, fa fantatro fa ny maha-Black lehilahy ato amin'ity fiaraha-monina dia sarotra kokoa noho ny ankamaroan'ny. Dia niasa tao amin'ny trano fandraisam-bahiny niaraka Black lehilahy sy ny vahiny raha tsaboina ahy amim-panajana sy nino afaka hanao ny asa amin'ny fomba tsara indrindra, navadibadiko ny jiro izy ireo niaraka tamin'ny mpiara-miasa Black mahitsy eo anatrehako. I nahavonjy towels ny trano, fa ny vahiny tsy manokatra ny varavarana ho azy ireo. Afaka mijery ao amin'ny vahiny mora foana izy ireo, fa nanontany “Tsy fantatro. Afaka hiatrika izany?” Afaka mijanona eto ivelany amin'ny fiatoana tsy manahirana fa ny polisy nanakana azy ireo mba hangataka “Inona no ry zalahy manao?” Hitsara ny olona ary hitondra Black olona hafa ary tsy-kevitra ny antony. Ary rehefa mahita Black lehilahy amin'ny olon-kafa, ny eritreritra voalohany dia “Miezaka izy mba hahatonga ny fiainana mora kokoa amin'ny tenany.” Ny hevitra faharoa dia “Tiany ny ankizy mba manana ny endri-javatra.” fa Hey, Zinona moa aho, hitsara? (Eny, na dia manao) Izaho dia mety tena hanambady ivelan'ny fotsiny ny hazakazaka noho ny fitiavako ny traikefa nahafinaritra izany tahaka hoy aho tany am-piandohana, io hevitra io fotsiny mahitsy fihatsarambelatsihy. Raha kely indrindra dia nanambady anao ianao fa ianao no havana antony.
Lynn Burgess • Novambra 1, 2013 amin'ny 7:06 PM • navalin'i
I mitehaka Trip & Jessica Lee. Fampidirana ny tena Fiangonan 'i Jesoa Kristy sy ny "volon-koditra" Ny fanambadiana ao amin'ny fiangonana dia ny valiny ny fanavakavahana eo amin'ny kolontsaina. Tsy misy afa-tsy iray hazakazaka, ny olombelona, "Lahy sy vavy no namoronany azy ..." (Genesis 5:2ny), ary na aiza na aiza no soratra masina hoe hanambady ihany ireo ny hoditra na maso feo endrika.
Tiona • Novambra 1, 2013 amin'ny 8:14 PM • navalin'i
Misaotra tamin'ilay lahatsoratra! Amin'ny maha-tokan-tena ny vehivavy mainty hoditra izay tia an'Andriamanitra sy mikatsaka ny hiaina ny fiainana amin'ny fomba izay mampifaly azy sy maneho ny fitiavany ny hafa, Izaho nangataka mafy momba ity lohahevitra ity. Ny lehilahy tokan-tena ao amin'ireo fiangonana no nanatrika ny ankamaroany dia tsy nisy lehilahy mainty. Indraindray dia mahatsapa toy ny izaho eo amin'ny farany ambany ny totem tsato-kazo, mifaninana manohitra ny fotsy, Any Azia sy ny Hispanika vehivavy lava, tondra volo sy ny endri-javatra izay tsy manana. Na dia ao mijery ny alalan 'ny Kristianina sasany mampiaraka toerana, Nahatsikaritra aho fa be dia be isan-jaton'ny lehilahy amin'ny mombamomba mafy izy ireo maneho tsara tarehy be liana amin'ny foko rehetra, afa-tsy Afrikana-Amerikana.
Ny lahatsoratra dia nampahery ahy sy ny mamantatra ny. Dia hatoky aho, Andriamanitra hanome amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainako, anisan'izany ny fifandraisana. Misaotra!
Misaotra noho ny manao ny marina!
Bebe • Novambra 1, 2013 amin'ny 10:31 PM • navalin'i
maro, Taona maro lasa izay raha ny lahimatoa dia momba 2, fiara izahay amin'ny alalan'ny mainty fizarana ny tanàna, ary dia naneho hevitra fa ny olona rehetra dia mainty ary nanontany hoe nahoana ny olona rehetra no mainty. Niezaka nanazava fa ela ny olona lasa izay nihevitra fa tsara kokoa raha toa ny olona rehetra ny fotsy nipetraka tao amin'ny faritra iray sy ny mainty rehetra ny olona nipetraka tao amin'ny faritra iray. Izaho koa dia nilaza fa izao no ahafantarantsika fa tsy hanao na inona no fahasamihafana loko ny hoditra no. : Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika……hoy izy, “Eny, ny zava-dehibe dia ny nahazo hoditra!”
Jays_Page • Novambra 2, 2013 amin'ny 12:56 aho • navalin'i
Marina izay nolazainao rahalahy.
mihaino ndekai • Novambra 2, 2013 amin'ny 3:32 aho • navalin'i
marring Andriamanitra matahotra vehivavy kosa no tsara indrindra azonao hatramin'izay atao mba hanana fianakaviana sambatra. marina izay nolazainao diany izay tianao ao amin'ny vehivavy dia manan-danja lavitra kokoa noho ny zavatra tokony hijery toy ny.
miresaka momba: Sabotsy Manaova horakora-outs: SBTS, Manapaka mahitsy, & fanompoana Links | H.B. Charles Jr.
Kaila • Novambra 2, 2013 amin'ny 4:19 PM • navalin'i
Tiako tokoa no izy fa misokatra sy manao ny marina amin'ny lahatsoratra ity. Tsapako toy ny asa volon-koditra fanambadiana sy ny fiarahana dia tsy maintsy hisy vahoaka lohahevitra misokatra bebe kokoa mba hiresaka amin'ny zavatra rehetra, satria taranaka tsapako ho toy ny olona manana olana izany. Avy ny fijery Heveriko fa tsara tarehy ny mahita fa ny fitiavana dia tsy manavakavaka.
Fa izaho koa mieritreritra ny fisokafana ho amin'ny dia satria efa lehibe foana ao amin'ny fiaraha-monina fa tsy iray firazanana sy ny ray aman-dreniko nanangana ahy tsy tia olona, ​​noho ny hoditra. saingy, Aho no mahatsapa ny sasany miraviravy taona ny zandriny nalaiko ny namana tsara indrindra, izay fotsy, ny Prom avy amin'ny rainy, satria ny renibeko dia tsy tia ny fotsy hoditra. Na izany aza, ny fanehoan-kevitra tsy hanova ny saina mikasika ny hoe iza no tokony na tsy tokony daty.
Tsy mbola nanan-safidy mikasika izay hazakazaka I mitondra ny datin '. saingy, ny fianakaviako rehefa nahita nanana sipa aho ary izy dia mainty, Gaga izy ireo. Gaga izy ireo satria ny vady aman-janany no miaina ao amin'ny faritra ho an'ny ankamaroan'ny olona fotsy ny lasa 10 taona sy ireo kosa fa ho hifehy ny fifandraisana.
Daniela • Novambra 2, 2013 amin'ny 4:43 PM • navalin'i
Izany no tena mampahery lahatsoratra. Ny vadiko dia mainty / El Salvadorean. .. ary izaho dia lehilahy Koreana…. Ny tena fahita mihitsy izany eo amin'ny kolontsaina Koreana hanambady ivelan'ny Koreana hazakazaka mainka mainty / Latina vehivavy. Amin'ny maha-hafahafa volon-koditra mpivady efa niatrika zava-tsarotra maro, fa ny hany zavatra manan-danja dia an'i Kristy sy ny fatorana ao amin'i Kristy amin'ny alalan'ny finamanana ary ankehitriny ny fiarahana alohan'ny fanambadiana eo amin'ny.
Tsy mbola tena mametraka ny zavatra toy izao, fa ity lahatsoratra ity dia niteny tamiko ka hanamarina ny tapa-kevitra amin'ny fomba hafa filankevitra izay nanenjika ny fitadiavana vady ao amin'ny foko.
Kevin • Novambra 2, 2013 amin'ny 8:12 PM • navalin'i
Mihevitra aho fa izany dia mahagaga tantara. Tiako ny fomba mangarahara ianao, satria be dia be isika miezaka hanafina zavatra toy ny te safidinao, fa tiako ny fomba hoy isika ny hanaiky azy ireo. Mivavaka aho mba Mbola maneho ahy ny zavatra toy izao, satria mino marina tokoa aho fa hanampy ahy foana ny foko sy ny masony hijery an'i an'Andriamanitra sy ny Teniny, ary tsy ny endriky ny vehivavy manodidina ahy.
JoeyE • Novambra 4, 2013 amin'ny 9:01 PM • navalin'i
Ny vadiko tsy nihevitra izy Te hanambady ny Yankee, Hispanika, kristianina jiosy. Faly aho dia nanao. :)
MJ • Novambra 5, 2013 amin'ny 1:18 PM • navalin'i
kintana! Noho ianao noho ny mizara ny tantaram-pitiavana. tanora, oniversite ny mpianatra sy ny olon-dehibe tanora dia tena mila ohatra toy izany! Fantatro foana aho, satria manana fipoahana miresaka momba ny firaisana, mampiaraka sy ny fifandraisana amin'izy ireo satria 2003. Dia antoka ho mizara amin'izy ireo amin'ny https://www.facebook.com/FMUniversity.
zacharybrunotte • Novambra 6, 2013 amin'ny 6:19 PM • navalin'i
Fotsy aho lehilahy amin'ny vadiny mainty. Mbola isika eo amin 'ny taona voalohany, fa tsy misy nenina! Manana ny totohondry zaza teny an-dalana, ary tiantsika ny fianakaviana kely. Like Trip Lee, I sary ny tenako manambady vehivavy iray ny ny firazanana (Heveriko fa ny voajanahary fotsiny). Fa na oviana na oviana aho nanontany azy indray mandeha na ny mieritreritra azy io ho “marina” na “diso.” Izy avy amin'Andriamanitra. Thats irery no hazakazaka izay mijery!!
NTOBEKO • Novambra 7, 2013 amin'ny 2:01 aho • navalin'i
Amen fam, voninahitra an'Andriamanitra noho ny faha-samihafa ny fahasoavana sy ny fiadanana.
ugh • Novambra 7, 2013 amin'ny 8:51 PM • navalin'i
Wifed azy ianao? Ugh, ianao no nanao hoe tsy manambady?
Jenn • Novambra 7, 2013 amin'ny 9:50 PM • navalin'i
Tsaroako rehefa nanomboka voalohany sy Jessica niaraka! I namporisika foana ny hahita anao hatrany amin'ny roa ao amin'ny fahasoavana. Izany no lehibe bilaogy, ary mihevitra aho fa mety ho maro nanafaka olona izay mifidy ny hijery ny fon'ny olona, ​​fa tsy ny any ivelany.
miresaka momba: Hevitra Misongadina ao Reading: 11/01/2013 – 11/12/2013 |
Joel • Novambra 12, 2013 amin'ny 4:25 PM • navalin'i
“Mihazakazaka mafy sy haingana manoloana ny Mpamonjy sy raha mahita olona iray, eo amin'ny zorony ny masonao nihazakazaka ao amin 'ny lalana, tokony maka fijery faharoa”
Rachael • Novambra 27, 2013 amin'ny 4:08 PM • navalin'i
Tena tia ity! Aho mizara izany amin'ny ray aman-dreniko. Ray aman-dreniko dia manana olana amin'ny zava-misy fa hitako ny tenako liana amin'ny hafa ry zalahy ny firazanana. Eny, na dia tsy foana liana tamin'ny indrindra ry zalahy araka an'Andriamanitra, nisy fotoana aho tena liana amin'ny tsara fanahy, fa noho izy tsy fotsy tanteraka ny ray aman-dreniko, ary nandroaka noraranay na inona na inona ny fifandraisana amin'izy ireo. Tena aho mizara izany amin'izy ireo, Antenaina izany dia hanokatra ny masony.
Tasi • Novambra 30, 2013 amin'ny 11:15 PM • navalin'i
rahalahy, teny toy ny volon-koditra fifandraisana tokony nalaina avy ny vocabs. Iray ihany ny olombelona.
Maurice • Desambra 6, 2013 amin'ny 2:59 PM • navalin'i
Tsy mbola nahita izay toy izany. Tsy mpanavakavaka aho, fa ny mihalehibe, nisy hevitra dia nampianatra antsika eo amin'ny kolontsaina Te hilaza fa fotsy ny ankizivavy ihany no tia anao sy mankahala ny fianakavianao. Izy tia ny ho mihidy ao. Dia hoy foana ny ray aman-drenibeko “raha tianao tsy ho tonga ny fampakaram-bady, na tsy handoa anareo mitsidika eo amin'ny an-trano, hanambady ankizivavy fotsy. Satria izy dia tsy hamela antsika mba akaiky anao.”
Abby • Desambra 9, 2013 amin'ny 2:55 PM • navalin'i
Manaiky aho hamandrika Lee
Mino aho fa raha tia azy Andriamanitra Tena sy ankasitrahany lazaiko nahoana no tsy
Mino aho fa Andriamanitra dia drafitra ho anao hihaona Jessica !
Abby • Desambra 9, 2013 amin'ny 2:56 PM • navalin'i
Btw no itiavako ny mozika diany Lee
miresaka momba: Blog Casserole – 12/13/2013 :: Carey Green - peo mpamokatra, mpanoratra, mpandahateny, mpandraharaha, fanambadiana & family mpanazatra, sy ny mpanara-dia an'i Kristy mafana.
Livy • Desambra 17, 2013 amin'ny 9:23 PM • navalin'i
Tena mampihomehy. Fotsy aho (anjara Hispanic, fa tsy misy olona hahalala ny mijery ahy), ary ny vadiko fotsy, fa ny avy any amin'ny firenena, izaho anefa mbola ao an-tanàna. Izy no avy any atsimo, ary izaho avy any avaratra. Isika dia tsy mitovy satria ny hoditra dia mitovy feo. Izahay sy ny resaka mandeha sy ny zavatra amin'ny dingana isan-karazany Nivezivezy eran'ny, sy ny fianakaviantsika dia tena samy hafa, fa mifankatia, ary Andriamanitra nitondra antsika hiara-. kolontsaina, anefa, mila fanitsiana ho antsika roa. Izany, miaraka amin'ny maha zioga mitovy ny hanompo ny Tompo, no fanambadiana rehetra momba ny! Faly nolazainareo ny!
Teboho Sekhosana • Janoary 13, 2014 amin'ny 5:47 aho • navalin'i
Ny mahatahotra nahary antsika tahaka ny endriny,toy izany loko dia tsy milaza aminareo ny thing.Love rahalahiko
Corina • Janoary 19, 2014 amin'ny 11:40 PM • navalin'i
Izany no tsara indrindra tantara………indrindra fa ny vadinao…ianareo ry zalahy no voatahy. …Dia Amena ho Ora tantara! !!!
Donald • Janoary 25, 2014 amin'ny 7:17 PM • navalin'i
Misaotra noho ny miteny ny
Amanda • Janoary 26, 2014 amin'ny 9:16 PM • navalin'i
Trip! Voalohany indrindra, ny mozika dia tsara tarehy sy ny tahotra aingam-panahy. Tiako ny hafatra mitory ianao amin'ny tokan-tena tsirairay hira. Tohizo ny mahafinaritra talenta nomen'Andriamanitra anao! Volon-koditra sy ny fanambadiana dia fifandraisana tena tsara tarehy. Tsy tokony mampaninona izay firazanana iray ihany no, fa toa anao nanao hoe:, vady araka an'Andriamanitra. Aho Caucasian, fa efa tia Afrikana Amerikana olona ny fiainany manontolo. Ny fianakaviako dia tena, tena, tena manaiky io. :) Na izany aza, Mivavaka aho mba Andriamanitra mandefa ahy ny marina iray, izay manana toetra tahaka ny an'Andriamanitra sy tompokovavy. Maniry aho ny olona izay milaza fa tia an'i Kristy mihoatra noho izy ireo tia ahy, fanajana, ary mamy. Ity Mahiratra ny Masoko na ho misokatra ho an'ny foko rehetra, fa tsy mainty fotsiny. Andriamanitra anie hitahy anao sy Jessica roa!
Terrice • Janoary 29, 2014 amin'ny 11:39 aho • navalin'i
Izany no lehibe lahatsoratra… Tena tia mamaky ny bilaogy. Misaotra noho ny fizarana ny tantara sy ny ho tena mangarahara. Ny Tompo no mampiasa anao amin'ny fomba mahatalanjona maro! TAHIN'ANDRIAMANITRA!
Ski • Janoary 29, 2014 amin'ny 9:55 PM • navalin'i
Wow, ity lahatsoratra ity dia mahatahotra! Voninahitra ho an'Andriamanitra! Trip, ianao dia tena tsara mpanoratra ihany koa. Tsapako toy ny namaky ny tantara olon-tiany na ny zavatra rehefa mamaky ny lahatsoratra. Maro ny mitsiky sy “awwwwww!” LOL Misaotra noho ny hery miasa mangina araka an'Andriamanitra eo amin'ny lafiny maro.
LeisleyAbrahams • Janoary 30, 2014 amin'ny 2:41 aho • navalin'i
Misaotra Trip izany no fomba tsara indrindra izany dia efa nanazava tamiko mandrakizay!!Ny ankizivavy namako, ary mivavaka aho ary miandry ny Tompo ho an'ny manaraka mainty step.I'm blonde feno Afrikana sy ny white..I'm izy nahazo fanontaniana foana ny antony tiako azy fa tsy ankizivavy ny hoditro, fa hitako izay rehetra ao aminy araka an'Andriamanitra dia vehivavy eo amin'ny afo ho an'i Jesosy, Tia an'i Jesosy mihoatra noho ny hatramin'izay izy no tia Ahy ka izany no zavatra ilaiko amin'ny life..You tena aingam-panahy ahy ny #wiseWordsTrip #NoWonderYouMyFavRapper
miresaka momba: Morning Mashup 01/31 | teolojia javatra
Aprilci • March 3, 2014 amin'ny 8:41 PM • navalin'i
Tena faly aho fa nandray ny fotoana nivoaka hanoratra ity. Ity lahatsoratra ity dia karazana kisendrasendra, tena tsy nieritreritra momba azy io (milay, Tsy mbola fantatro mihitsy aza mandra-nisy ity pejy ity amin'izao fotoana izao). Na izany aza, Faly aho no nanoratra azy io…Mino aho fa ny ampahany izay niteraka ny mahaliana indrindra dia ny olana rehetra tian'ny. Aho nanambady lehilahy iray 5 taona (manana isika 3 ny ankizy miara-) izay tsy te hanambady intsony satria ny teniny—Dia tsy ny safidiny (Matetika izy no mampiasa ny sôkôla gilasy / lavanila gilasy fampitahana ny miezaka mba hanaporofoana ny teboka–ny safidiny dia vehivavy tamin'ny à….”tsara” vatana–Avelao aho tamin'izany). Ny adala zavatra no maha-kristianina no tena mpiangaly rap—(????). Na izany na tsy, Faly aho mahita fa nandeha lalana marina—mametraka ny faniriana mihoatra noho ny fanirian'ny nofo…..Na izany na tsy, Tiavo foana ny vadinao tahaka an'i Kristy tia ny Fiangonana….Hiaro anao aho amin'ny fivavahako rehetra…..
Ny College Companion • Aprily 17, 2014 amin'ny 5:49 PM • navalin'i
Matetika izaho tsy mamaky lahatsoratra amin'ny bilaogy, fa tiako ny milaza fa izany dia soraty-up nanery ahy mba hojerentsika sy manao izany! Ny soratra fomba efa Gaga aho. Misaotra anao, tena tsara lahatsoratra.
OTHER • Aogositra 31, 2014 amin'ny 1:45 PM • navalin'i
Yep. Same antony aho ankizivavy nanambady fotsy. Misaotra anao nizara. tsara hamaky. soa ny molony nataony. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao rahalahinao. Miderà ny Tompo, foreal Tho.
Tgirl • Novambra 22, 2014 amin'ny 9:24 PM • navalin'i
tsara, Mino aho fa ny olona no tohina kokoa noho ny zava-misy fa ny vitsy BLACK TSARA lehilahy vadiny-tra White ny vehivavy fa tsy antsika MARO BLACK vehivavy. Mampalahelo fa misy fanehoan-kevitra ara-poko, fa ny olona araka ny fomba mahatsapa, in indrindra, vehivavy- izay Black. Manana fitsipika roa sipako dia Latino & Black aho ary maninona (fa Black vehivavy ny daty ivelan'ny ny hazakazaka). Etsy ankilany, rehefa mahita mendrika (izay tena vitsy) Black lehilahy fotsy / vehivavy hafa, Ho tahaka DANG hafa koa i rahalahy lasa…fotsiny ankehitriny fa niteny avy ao am-po fanavakavahana na tsia. rehefa izay dia izay.
miresaka momba: A manambady Man | Headline
Jeff • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:05 aho • navalin'i
Hey Trip, Misaotra noho ny tsara sy voahevitra valin'ny fanontaniana sarotra. Toy ny aminareo aho, tsy manenjika na vady, rehefa nihaona Michelle. Misy izy, ary misy aho ary nahita izao tontolo izao ao amin 'ny fomba. Ny hazakazaka Tsy ny tena zavatra samy hafa momba antsika sy ny finoantsika no zavatra izay mitondra antsika ny firaisan-tsaina. I ihany no mitondra ny datin 'ary efa nanambady vehivavy mainty aho nanambady mihoatra noho ny adidy (zaza) ary ny ara-kolontsaina fanantenana noho ny fiaraha-mientana ifampizarana mahaliana. Koa satria aho tsy nanana fifandraisana amin'Andriamanitra ankoatra ny fitsidihana fiangonana indraindray Mino aho fa narary aho vonona ho amin'ny fanambadiana. Raha ny volon-koditra toy izany koa no tena samy hafa izahay soatoavina ary rehefa tafasaraka sy nisaraka izahay dia tonga Andriamanitra ao amin 'ny fo torotoro mba hanasitrana ahy. Feno fankasitrahana aho noho ny toy izany ny herim-po vadiny hijery ny mety fa tsy ny lasa sy ny ho tia ahy mihoatra noho volon-koditra. Ny zanakay ary ny asa fanompoana am-piangonana dia maneho ny fitiavan 'Andriamanitra ny olona avy tamin'ny isan-mandeha amin'ny fiainana. Ny hevitra dia ny Fanjakana manerana izao tontolo izao ho toy ny equalizer lehibe sy ny an'i Jesosy ho Tompo rehetra.
Jeff • Desambra 4, 2014 amin'ny 10:39 aho • navalin'i
Hey Trip, Misaotra noho ny tsara sy voahevitra valin'ny sarotra lohahevitra. Toy ny aminareo aho, tsy manenjika na vady, rehefa nihaona Michelle. Misy izy, ary misy aho ary nahita izao tontolo izao ao amin 'ny fomba. Ny hazakazaka Tsy ny tena zavatra samy hafa momba antsika sy ny finoantsika no zavatra izay mitondra antsika ny firaisan-tsaina. Taloha tamin'ireo olona niarahako, ary nanambady vehivavy mainty hoditra avy tany adidy (zaza) ary ny ara-kolontsaina fanantenana (family) noho ny fiaraha-mientana ifampizarana fitiavana. Koa satria aho tsy nanana fifandraisana amin'Andriamanitra fiangonana tany an-dafin'i mpanatrika, Narary Aho voaomana ho fanambadiana. Raha ny volon-koditra toy izany koa no tena samy hafa izahay soatoavina ary rehefa tafasaraka sy nisaraka izahay dia tonga Andriamanitra ao amin 'ny fo torotoro mba hanasitrana ahy.
Feno fankasitrahana aho noho ny toy izany ny herim-po vadiny hijery ny mety fa tsy ny lasa sy ny ho tia ahy mihoatra noho volon-koditra. Ny zanakay ary ny asa fanompoana am-piangonana dia maneho ny fitiavan 'Andriamanitra ny olona avy tamin'ny isan-mandeha amin'ny fiainana sy ny aretina tsy azo sitranina mila ny fahasoavany. Ny Fanjakana dia izao tontolo izao sy ny lehibe equalizer an'i Jesosy ho Tompo any amin'ny firenena rehetra. Dia mivavaka mba hahazo ny fianakavianao sy ny azafady mivavaha ho anay koa.
Kennedy • Desambra 18, 2014 amin'ny 2:13 aho • navalin'i
I niaraka diany dia tsy mihevitra aho dia afaka mahazo ny olona iray toy ny sasany izay toerana mandrakariva noho ny lieying sy ny fandrobana ny olona aho, dia tsy miraharaha ny sasany SMS misy mailaka fa U tsy afa-mandositra ny drafitr'Andriamanitra toy izany dia tahaka ny mahafinaritra ahy ny namaky azy satria indray ny politika no misy izay tia ahy, fa tsy ny foko dia nahazo vehivavy Amerikana fotsy izay tsy miraharaha hazakazaka,kolontsaina ihany no olona tia & miahy azy “izay ahy” amin'Andriamanitra izy rehetra azo atao no tena safidy.
Kennedy • Desambra 18, 2014 amin'ny 2:19 aho • navalin'i
I niaraka diany dia tsy mihevitra aho dia afaka mahazo olona manao ny marina toy ny sasany izay toerana mandrakariva noho ny mpanotrika teny sy ny fandrobana ny olona aho, dia tsy miraharaha ny sasany SMS misy mailaka mba hifandray azy ireo nefa U tsy afa-mandositra ny drafitr'Andriamanitra izany dia toy ny mahafinaritra ahy, ary namaky azy io ho mainty ny politika dia misy toerana izay tia ahy, fa tsy ny foko dia nahazo vehivavy Amerikana fotsy izay tsy miraharaha hazakazaka,Kolontsaina etc.… olona tsara ihany no olona & miahy azy “izay ahy” amin'Andriamanitra izy rehetra azo atao no tena safidy.
Ryan • Desambra 27, 2014 amin'ny 1:43 aho • navalin'i
Mitady torohevitra tena tsara:
Aho niaraka tovovavy izay aleony mainty ry zalahy… ary fotsy aho. Manome toky ahy izy fa tia ahy be dia be, saingy mbola lehibe ho ahy ny tsy fandriampahalemana. Manantena aho fa ho indray andro hanambady zazavavy ity. Misy hamaky tsara na inona na inona momba ity olana ity, na na inona na inona ny torohevitra?
Naleshia • Janoary 8, 2015 amin'ny 11:37 PM • navalin'i
Eny Trip! Iray aho vehivavy mainty sy fotsy ny ankamaroan'ny olona amin'ny oniversite sy ny karazana resaka io foana ny eo anivon'ny faribolan'ny mainty ny vehivavy sakaizany. Na dia manana ny tiany ny olona mainty hoditra (Aho noho ny mainty rehetra ny fitiavana), Aho misokatra foana ny niaraka ivelan'ny foko aho satria tsy nahalala hoe iza Andriamanitra dia afaka mampiasa mba manao fiovana eo amin'ny fiainanao. Hitako ny olona hoe iza moa izy dia mifototra amin'ny ny toetra, toetra, ny soatoavina, ary ny zavatra inoany mihoatra noho ny zavatra tahaka ny mahazo aho mba hekenareo. Tarehiny no manan-danja ary misy toe-javatra ara-tsosialy sasany izay mety ho azon'ny olona, ​​raha ny manan-danja hafa, natsangana tao amin'ny kolontsaina ara-poko hafa, fa ireo lafin-javatra tsy dealbreakers. raha na inona na inona, -dry zareo manao fifandraisana mahaliana kokoa. Ny tantara dia tsara tarehy toy izany tantaram-pitiavana izay koa manantena ny hiaina indray andro any. Rehefa nozohina, tsy afaka manampy iza ianao raiki-pitia, na inona na inona raha ny mainty, fotsy, mavo, Barney volomparasy, na Ninja Turtle maitso. Ny fitiavana dia manerana izao rehetra izao, ary mihoatra ny foko. Isika Kristianina no tokony ho tia rehetra na dia miaraka amin'ny fahasamihafana. Indraindray ny fanahinareo vady, tena lalao, fiainana mpiara-miombon'antoka, ary namana tsara indrindra dia olona iray izay mifanohitra tanteraka hoe iza ny tenanao an-tsaina ve ny miaraka. Izany no mahatonga ahy mitsiky ny mandre fa dia mandamaka ny fomba dia hanatona Jessica ho an'ny manetry tena, fangorahana, sy ny vehivavy natahotra an'Andriamanitra fa mbola ary mbola. Ny firaisana no tena nandray anjara fanekena fa ny finoana an 'Andriamanitra mihoatra ny fahasamihafana. hitahiana.
marika • Febroary 22, 2015 amin'ny 3:17 aho • navalin'i
Hey, tsapako ianao. Manana lova sy Australian Aborigène foana aho te hanambady iray hafa Koori (Aboriginal) fa noho ny kolontsaina sy ny razana dia nanao azy ny fivavahana tena sarotra. Nataoko izay hanambady ny Anglo Red lohany. Fa izy tia an'i Jesosy, ary izany no zava-dehibe.
Isaac • Aprily 9, 2015 amin'ny 11:50 PM • navalin'i
Sambatra aho hahafantatra fa tsy ny politika no vahaolana araka izay mahazo akaiky ny fotoana dia manao safidy eo amin'ny fiainana mpiara-miasa!
Jamel • Jolay 12, 2015 amin'ny 9:17 aho • navalin'i
cece • Septambra 24, 2015 amin'ny 3:56 PM • navalin'i
Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mampaninona izay hanangana anao fa zava-dehibe ny fomba hitondrana anao, ary ianao no tsara indrindra hatramin'izay mpitandrina tena
Ezra • Novambra 6, 2015 amin'ny 3:17 PM • navalin'i
"Ary rehefa hilentika ny masoandro, dia sondrian-tory Abrama; ary, izany, ny aizina mahatsiravina indrindra no nahazo azy. Ary hoy Jehovah tamin'i Abrama, Mahafantatra marina tokoa fa ny taranakao dia ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy, ary hanompo ny olona any; Ka dia ho hampahoriny efa-jato taona; Ary izany firenena izany, izay hotompoiny, no hitsarako: ary rehefa afaka izany, dia hivoaka mitondra harem-bevava. "
Araka ny Tonon-kiran'i Solomona 1:4-6:
"Mainty aho, nefa tsara tarehy, Ry zanakavavin'i Jerosalema, toy ny lain'i Kedara, toy ny ambain-Solomona. Aza mibanjina ahy, fa mivalomainty aho, satria ny masoandro efa nijery ahy: ny zanak'ineny aho dia tezitra tamiko; dia nanao ahy ny mpiandry ny tanim-boaloboka; fa ny ahy ny tanim-boalobony aho, tsy mba nandrasako. "
Mifanohitra Numbers 12:10-15 Mariam milaza fa avy amin'Andriamanitra dia voaozona rehefa disrespects ny mpaminany, dia toy izany no Mariam Nisy nangalatra ny azy Hue na loko lasa ny oram-panala. Ny esoeso ity singa dia ny Kristianina efa namono manontolo Kaokaziana kolontsaina sy milaza izy ireo ny nifidy olona, raha ny Baiboly hebreo boky momba ny Egyptiana Andriamanitra izay dia manamarika fa ny Isiraely / Jakoba niteraka 12 lahy sy namokatra ny firenen'i Israely izay mainty, toy ny mpikambana rehetra avy amin'ny Fanahy Mitondra ny.
Fantatro hoe iza moa aho. Ary Izaho tsy mifanohitra amin'ny Nubian olona niaraka / nanambady fotsy hoditra. Aho fa tsy hanao izany, saingy fotsiny Natomboka ny ny dingana, ka dia afaka soa aman-tsara handova ny tany fa tsy zavatra isika ankehitriny maharitra.
Nathan Yonas • Novambra 26, 2015 amin'ny 1:01 PM • navalin'i
Andriamanitra anie hitahy U & Ora family continously
in ny tsara indrindra
PK • Desambra 24, 2015 amin'ny 3:08 PM • navalin'i
Faly aho nahita ity lahatsoratra ity aho. Enga anie ny olona bebe kokoa amin'ny volon-koditra naneho them9 fifandraisana toy izany oharina amin'ny manana ny hametraka vondrona hafa teo amin'ny olona. Rehetra manao ny marina, ny Tompo efa miasa amin'ny foko rehefa tonga izany foto-kevitra izany. Aho taloha tsy miraharaha mihitsy ny momba izay olona dia niaraka / manambady ny fanavakavaham-poko miteny. Na izany aza, ratsy ny sasany fihaonana amin'ny volon-koditra mpivady sy ny amin'izao fotoana izao manohitra ny vehivavy mainty hetsika nandao ahy jaded. Fa misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany, satria ny famerenana ny foko sy ny fanokafana ny maso hahita sy ny fanambadiana ny olona ny fomba marina – na dia ireo izay maneho fihetsika ratsy manoloana ny foko Izaho an'i.
ions MARVO • Janoary 3, 2016 amin'ny 4:18 PM • navalin'i
foward mijery ny nahita ny vehivavy fotsy izay tia sy hanambady ahy fa iza Raha izaho, dia tsara kokoa na ratsy indrindra dia ny nofy
na • Janoary 25, 2016 amin'ny 1:44 PM • navalin'i
Inona no tsy maintsy hoe Tena mampalahelo .. I m avy any amin'ny faritra atsinanan'i izao tontolo izao sy ny fotsy aho Nanambady ankizivavy.
ny sarotra ny cultrual fahasamihafana.. Izahay mahazo ny fisaraham-panambadiana.
Ny fianakaviako doesnt te hihaona amiko, ary izaho tsy hahazo nanitsy tao ny fianakaviany.
Izy no tonga lafatra afaka aho mandrakizay vehivavy manana, isika fa Nisaraka i noho ny volon-koditra olana..
Ray aman-dreniko izy ireo marary sy te-hitsidika Etazonia sy ireo cant miara-miaina amin'ny vadiko. Izaho no lohan'ny ny ankohonany ka tsy maintsy takecare ny fianakaviako backhome.
Im vaky fo, Kivy tanteraka amin'izao fotoana izao ny zava-mitranga ankehitriny becuase isika dia alalan'i fisaraham-panambadiana .
I foana tia azy
fanomezana • March 5, 2016 amin'ny 1:59 PM • navalin'i
Wow. Izany no tena mahery vaika, Mampahery ary manokatra ny masontsika hahita mihoatra ny ara-batana maso satria ny olona roa mampiray azy ireo Andriamanitra mba hanatanterahana ny fikasany.
TheHonestTruth • March 27, 2016 amin'ny 1:15 PM • navalin'i
Tsara aho fotsy lehilahy tsara ary mbola tsy afaka hihaona Tsara vehivavy mba hanorim-ponenana any amin'ny hatramin 'ny vehivavy amin'izao andro izao dia samy hafa be dia be kokoa noho ny taloha.
Eric • Mey 2, 2016 amin'ny 12:22 PM • navalin'i
Tena afaka tsy miraharaha izay foko ny vadinao no, nefa mampino ny hihaino anao adiresy izao (na misy) olana toy izany ny fanetren-tena sy ny poise. Misaotra anao aloha mitady an'Andriamanitra.
Brooke • Jona 4, 2016 amin'ny 5:06 PM • navalin'i
Ny fitantarana rehetra dia mety ho teny tsy truer, ho mpino na tsia. Tsy maintsy hanamafisana mampiasa mankany amin'ny mivantana,” Tsy mbola nikarakara, tena, inona no Fiaviana ny vadiko dia ny ho tonga, toy ny safidy voalohany dia efa nahita azy ho mainty hoditra.” Toy ny maro, Efa stuggled amin'ny finoana toy ny mitady adidy amin 'ny sitrapony, fa aza mino izay rehetra aho ity, fa Izy no naniraka Ahy izay irin'ny foko ( tsy tian'ny tena manokana fotsiny) satria ho ahy, Mino aho fa no toerana ankoatra ny faharetana sy / na ny finoana dia mivoatra. Rehefa miombon-kevitra aho ny tantaranao tahaka ny ny fijoroanareo ho vavolombelona, I koa manana kaonty miandry izay toa ny azo, satria izy io hitarika amin'ny faniriana, ilaina, tsy hoe ny tsi-fisian-. Mba kokoa manokana: Ara-batana aho tia ho teo amin'ny antokon'i David Beckham, Chris Hemsworth, sy Ben Affleck (rehefa single), fa tsy te-hanambady azy ireo; Tsy ny foko rehefa maniry ny hatsaran-tarehy, hery, toetra, sy ny herim ny mahagaga-namorona ny olona mainty hoditra! Izahay efa nitoetra eo amin'ny tontolo iray afaka tamin'ny ota, izany angamba tsy ho olana be, fa izao tontolo izao dia toy izany natao tsara-olombelona dia toy ny tsinontsinona, afa-baraka, hofaizako, vovoka ny felany, sns…I mialoha tsy mila tsy hamita ny handeha hiaraka aminy nirahiny. ary Farany, ho ahy, nomena disconcerning ankehitriny ohatra ny lehilahy mainty, Tiako ny zanako, ary mila ny mahita fa izay indray maka, (lehilahy tsara toy ny rainy fony izy tsy mbola nandalo) mbola afaka ary ho indray…….
Marwa • Jona 25, 2016 amin'ny 2:37 PM • navalin'i
Izy io dia tena fifaliana lehibe sy fitahiana ho ny fiainako, izaho sy ny vadiko no manomboka tsy nanan-janaka ho an'ny 8years ankehitriny noho ny tsy fahafahany ho ahy mba hiteraka, ary izany no mamaha ny olana isan'andro ao an-tokantranoko,Noho izany dia nitsidika namana vehivavy any Florida,dia niakatra tamin'ny hevitra nanangana zaza iray izay tsy tao an-tsainy,Ary ankehitriny dia tsy nahazo safidy toy izay mangataka ny ankizy sy ny tsy ampoizina ny zava-drehetra amin'izao fotoana izao dia mora foana sy faly aho miaraka amin'ny zazalahy kely Hansom(fahendrena)dia nandray avy any amin'ny firenena Inter zaza natsangana foibe.
Mary • Jona 28, 2016 amin'ny 10:22 aho • navalin'i
Izany indrindra no mahatonga ahy relief.That dia fanapahan-kevitra tsara mba hanaovana. Ianao tsy mahalala ny tsara rehefa tonga around.No olona na inona na inona aho hazakazaka hifikirany ary izany ho toy ny Afrikana American.That Tsy voatery ho foana ao amin'ny faritra hampiononana ahy fa afaka mivoaka ny efajoro. Tena tiako ity fanambarana ity izay nomenao . Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao maro be fitahiana bebe kokoa eo amin'ny fiainanao.
Andrew • Aogositra 18, 2016 amin'ny 1:04 PM • navalin'i
Marcus • Septambra 13, 2016 amin'ny 9:00 aho • navalin'i
Lehibe ny aminareo rehetra izay efa nanambady zanak'Andriamanitra. Tokony hanambady olona izay mahay tia antsika ary ho tia antsika! Ity Info ho an'ny daters ihany–tsy mpivady; toy izany, raha manambady ianao, mijanona manambady, MBA MIANGAVY RE! Raha miaraka, avy eo manontany amin 'Andriamanitra mba haneho iza ianao tokony hanambady–satria tsy fantatrao amin-kitsimpo! Ny olona mahay mitendry tsara-tsara / mpihatsaravelatsihy tsara noho ny antony samy hafa sy ny hamitaka anao, ny olona dia afaka ny ho olona tsara(fa tsy tsara ny iray ho amin'ny lalana Andriamanitra ho anao–Tsy mifanaraka NY ASA–na dia 2 zanak 'Andriamanitra mety ho 2 lalana samy hafa izay tsy nilahatra; tsarovy ny andinin-teny izay Mino aho fa ny mpianany niteny mafy ny lehilahin'Andriamanitra satria tsy mifandray amin'ny azy mivantana; Jesosy’ valiny dia mampiseho fa ny olona afaka manana asa fitoriana ekena ho an'Andriamanitra, fa ho tsy mifanaraka; avy eo indray, Andriamanitra nilaza tamin'i Hosea mba hanambady vehivavy janga–raha ny fahatsiarovana manompo ahy tsara). Noho izany, amin'ny alalan'ny fisafidianana ny misy manao sarotra(indraindray, ny zanak'Andriamanitra dia mety ho diso ny anankiray ho Anao), ianao mety tsy ho nahavita avy amin'ny fitahiana izay mety ho nanokatra ihany amin'ny marina iray. Azonao atao mihitsy aza mitondra ozona ho anao; ny ankizy Mety ho narary na ho faty ny sasany eo anatrehanao; mety tsy ho tsara ho anareo ray aman-dreny ny ankizy; dia mety ho tsy hamokatra izy na tsy hamokatra izy nandritra ny fotoana ela; ny mba hifankatiavanareo sy ny zavatra mbola tsy mety; mety hahazo ny olona iray izay efa voafitaka anao(misy mpamosavy, mitsiatsiaka, mpihatsaravelatsihy, mahery setra mpampijaly, miraharaha naggers, cheaters, ascribers hanokatra firaisana ara-nofo na LGBT fomba fiainana, ara-tsaina ny olona miovaova, ascribers ny firaisana amin'ny biby–izay ihany no mampiasa biby ny fianakaviana ho toy ny fonony, tsy mino an'Andriamanitra na nisalasala–izay nampiasa ny fivavahana mba handresy anao ny, mpandainga, ny narcissistic na tia tena, mpisotro toaka sy ny drugheads, conpeople ary mahazo vola tsy ara-dalàna, mpanompo sampy / satanists, kamo ny olona, ny jaza–ratsy miteny, mazava ho azy, am-bava mpampijaly, cursers, ny olona izay tsy mibebaka, serial mpamono olona, mpametaveta / olom-pady olona, sns. avy any).
Mangataka amin'Andriamanitra ianareo, satria manana drafitra ho anao sy noho ny(raha hisaraka na inona na inona antony) fa mino aho fa tso-po ianao dia tsy tokony hanambady indray mandra-maty ny vadinao(na manana firaisana ara-nofo indray ho an'ireo izay fetsy). Ianao nisara-panambadiana tsy tokony mahazo fe-potoana(firaisana ara-nofo afa-tsy nivadika), fa tokony ho tsy misy firaisana ara-nofo, na ny fanambadiana raha manao na inona na inona antony. Afaka milaza amim-pahatsorana fa raha(raha mahazo figagana ny vady, ary tsy afaka maka izany–tsy tokony hitranga na dia avy eo, fa inona no tena hataony) na ny vadinao no antony nisara-panambadiana no hatao fa afaka mandeha tsy misy firaisana ara-nofo ara-panambadiana noho ny fe-potoana izay mety mivoaka ny firaisana ara-nofo voalohany(izany fotoana izany am-polo taona maro mety ho)?! Izany no mahatonga anareo tokony hangataka Andriamanitra ianareo TOKONY hanambady! Ny fialana fahotana taty aoriana(satria mety na tsy mahazo tsara vintana, kanefa fantany) ary ny kristianina dia ny fanalehibiazana! Ahoana kosa raha Andriamanitra Tsy namaly ny olana ara-panambadiana(ankizy, koa) vavaka–famelana anao mijinja izay efa voafafy ho an'ny misafidy ny hanambady noho ny antony manokana ihany?!
Marcus • Septambra 13, 2016 amin'ny 10:59 aho • navalin'i
Indray olana: misy fanambadiana(raha tsy mahalala an'Andriamanitra no nanao sonia eny aminy–hangataka Azy mba ho antoka; aza maminavina) izay mety ho nangataka olana: 1. BMWF fanambadiana in America: miaina ao amin'ny tontolo fotsy mandroso, tanjona fanavakavahana! White mpanavakavaka dia tia ady amin'ny fanavakavahana mihoatra noho ny vondrona izay efa nahita! Ary ny mainty hoditra no maro fahavalo 1! Napetrany ny zavatra maharikoriko ao amin'ny sakafo, mainty hoditra sy ny ankizy dia mety hahazo maloto / mikraoba-Nampiana namihina sy handshakes, milaza ozona famosaviana / ozona mety hatao amin'ny lehilahy na ny ankizy, piraofilina an'ny polisy sy nampijaly ny olona mainty mahery vaika kokoa ny fanambadiana raha izany no itoriana BMWF rehefa misy tokony, mandà family, izy ireo “nepotize” fotsy madio ao amin'ny fianakaviana(ankizy, koa) ary manavakavaka mifangaro mpikambana(ankizy) ary ny mainty hoditra, imonomononany ny “fahavalo”, dia hanafika sy / na mamono lehilahy mainty, sasany rahalahy / anabavy ny fifandraisana sarotra dia sarotra, na dia ho inimical ary fotsy ny ankamaroan'ny rahalahy / anabavy-in-lalàna dia tsy hanana na inimical fifandraisana amin'ny mainty mifanitsy, mpampianatra tsimoramora villify, sns. Azonao an-tsaina angamba ny ankizy satria tsy misy antony / a mora fifandraisana amin'ny reny fianakaviana? amin'ny Noely: fotsy ankizy hahazo $150 fanomezana avy amin'ity mpikambana, fa ny ankizy mahazo $25 fanomezana na na inona na inona. Azonao an-tsaina raha toa zava-nitranga ny havanao(vady na ny zanaka) ary manontany tena raha nanan-javatra ny fianakavianao mba hanaovany azy ka tsy afaka manaporofo izany? Maro amin'ireo zavatra ireo no azo antenaina; fa koa, ireo mpivady tsy maintsy miatrika ny zavatra hafa fanambadiana tsy maintsy miatrika, koa! Bills, an-trano an-trano / fananana care, family fandaniana(indraindray tsy ampoizina), ankizy discussion(Manokana sy mitaky fotoana bebe kokoa noho ny hafa–na dia mampahery ny zanakao mba mahatsapa fa mpanavakavaka mahita azy toy ny fotsy hoditra sy ny mainty Mahaiza mandanjalanja izy / izy tia ray aman-dreny sy ny olon-drehetra mitovy isanisany), asa, manokana fotoana hiarahana amin'ny namanao mba ho foana ny namanao, sns. Misy be dia be no mitranga izay mahatonga ny fanambadiana tsy faly, raha tsy manendry izany!
2. Fanambadiana izay misy banga be eo amin'ny filozofia ara-pivavahana, na aiza ny hevi-dehibe ao amin'ny fampianarana ara-pivavahana dia mifanohitra na tsy mifanaraka. Manontany fotsiny Solomona mpanjaka. Christian sy Silamo. Christian sy ny Bodista. Christian sy ny Hindoisma. Christian sy ny tsy finoana an'Andriamanitra. Christian sy ny fivavahana amin'i Satana(Illuminati, freemasonry, ary ny sekta hafa sy ny fifandraisana). Ataovy azo antoka fa tian'Andriamanitra ianao eo anatrehan'i miditra, satria Andriamanitra dia afaka mampiasa anao mba hampiova finoana ny olona na ny olon-kafa ao amin'ny dia iza no hihaino!
Brian • Desambra 28, 2016 amin'ny 6:25 aho • navalin'i
tsara lahatsoratra, efa niresaka amim-panajana amin'ny fanahiko.
Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao mandrakizay any amin'ny fiainana mandrakizay.
Joel • Janoary 2, 2017 amin'ny 4:03 PM • navalin'i
Ny antony dia Awesome. tiako izy izany. hotahian'andriamanitra anie ianao.
Mbah Joel • Janoary 2, 2017 amin'ny 4:04 PM • navalin'i
Ny antony dia Awesome. tiako izy izany. Andriamanitra
JoshuaKirkland • Janoary 7, 2017 amin'ny 2:42 PM • navalin'i
Tena midera ny fiara, tapa-kevitra, finiavana, & finoana. Fa ny zava-misy io aretina io ianao no namely anao & Tena nanao fiainana sarotra ho anao no tena adala! Na izany aza, ianao perserve & miady amin'ny alalan'ny rehetra izay & mbola hamita ny zavatra Hanontany anareo. Ary rehefa nahare fa ny Unashamed Tour ny 2012 dia ny vondrona farany fitetezam-paritra, saiko dia nanomboka nanontany tena ny amin'ny antony ianao mihantona azy. Indray mandeha aho dia nahita fa mbola nanan-ny havizanana aretina & fa dia mibanjina ny asa fitandremana internship, Nanomboka hahatakatra fa Andriamanitra dia nanana antony iray hafa ho anao. Rehefa navoaka Mitsangàna, SOOOO faly aho! Man, Soooooo aho natrehin'ireo! Mba hilaza aminareo ny marina, The Good Life no 1 Hip-Hop kristianina Album I nihaino & nividy. Ever nanomboka teo, I Efa mpijery tao valahana hop izahay midera mozika i Jesosy. Ny hira no kery toy izany teo amin'ny fiainako. Mivavaka aho mba manohy hiady ny alalan 'ny ady mafy sy hisy fiantraikany ny fanjakana! #116
Blosm • March 8, 2017 amin'ny 3:10 PM • navalin'i
mahagaga tantara. Faly aho, na ianao. Aho nanambady ahy ihany ny foko fa tsy vonjeo Aho ho afaka amin'ny fiainana fadiranovana velona aho. I ihany no nitandrina ny fanambadiana mba hiarovana ny ankizy amin'ny hoavy sy ny fisaraham-panambadiana Halan'Andriamanitra. Mipetraka any amin'ny helo nanantena ho any fitodiana.
Achi • Mey 7, 2017 amin'ny 5:57 PM • navalin'i
Ny fitiavana dia ny zava-drehetra…loko na inona na inona…
LaKiKI • Mey 11, 2017 amin'ny 9:57 PM • navalin'i
Iza no miezaka ny mandresy lahatra ny safidy? ianao, na izahay? Raha tena naka ny vadinao, noho 'Andriamanitra ity lahatsoratra ity dia tsy misy. Tsy mila fahazoan-dalana. Eny, Mino aho fa be dia be ny Black Araka An'Andriamanitra vehivavy izay toy ny mahavariana toy ny nihavian'ny vehivavy no nifidy. Nefa tsy te azy, na nanana liana. Ny faniriany dia ny vadinao. Izany no tsara. Ajanony fotsiny manandrana manamarin-izany, tahaka ny mahatsikaiky sy Miondrika.
AHO mihevitra afa-tsy naneho hevitra fa ny toe-cosign atao navoaka, fa izaho kosa hiezaka indray. Free teny raharaha!
James • Janoary 23, 2018 amin'ny 1:46 PM • navalin'i
WOW TENA. Mila mandeha amin'Andriamanitra sy hanangonanao ny teny. I dont mieritreritra fantatrao izay lazainao momba ny antony mazava tsara ianao nahatratra ny teboka ity. Im mieritreritra ianao dont tonga saina ny tanjon'ny azy manao izany dia ny hanampy sy hampahery ny hafa miaraka amin'ny toe-javatra mitovy. Ny fomba tonga eny feo tahaka ny lolom-po, na ny tsy fahalalana, na mety mihitsy aza ny tenany prejudence satria ataonareo fa miezaka mba hanipy azy ao amin'ny firenena miatrika izy amin'ny vehivavy fotsy sy thats tsy ny raharaha. Ary tahaka anao toa very saina fotsy izy amin'ny fe-potoana ankizivavy.
Tiffany • Jona 27, 2017 amin'ny 5:55 aho • navalin'i
Inona no ny Trip. Izany no Tee. Tena nahafinaritra ahy io lahatsoratra io. Eny, na dia taona maro any aoriana aho. Tpt. Fa amim-pahatsorana misy antony fotsiny aho nahita ity. Ny lehilahy no fotsy ary koa sary an-tsaina ny tenako lehibe amin'ny lehilahy mainty. Fa Andriamanitra no namorona ahy ho hafa. Na dia nihalehibe aho rehefa ho hariva eo amin'ny andian-tsoratra zanak'osy, fantatra amin'ny anarana hoe iray amin'ireo fellas. Avy eo tany amin'ny oniversite ny fellas lohateny miova rehefa nieritreritra aho mahafatifaty. Fa satria aho tandapa anankiray ho sarotra ho an'ny olona mainty hoditra mba hanohana ahy. Dia nitsangana aho nitso-drano amin'ny 30. 3 taona mahery tamin'ny zazavavy kely tsara tarehy. Mivavaka aho izao tontolo izao fotsiny dia afaka miangona sy ahafantarantsika ny fitiavana tsy misy loko. TAHIN'ANDRIAMANITRA
P.S. Ny rahalahiko Lil vadiny Azia, manambady 9 taona. Reniko miantso antsika ny mpandrendrika vilany ny fitiavana.
'S PTJI MJI MANAMBO • Jolay 16, 2017 amin'ny 7:59 aho • navalin'i
HOTAHIAN'ANDRIAMANITRA ANIE IANAO!
Ianareo nitahy ahy.
Millz • Aogositra 5, 2017 amin'ny 10:35 aho • navalin'i
Samy mivady mankasitraka fifanakalozan-kevitra toy izany isika rehefa mahatsapa ireo karazana fitantarana toy ny “touchy” amin 'ny mety ho mila miresaka eo amin'ny fiaraha-monina sy ny maha zava-dehibe kokoa ny Kristianina. Aho mainty hoditra tanora lehilahy izay, ny vadiko, izay fotsy, dia fito taona tanora kokoa noho izaho. Samy tia an'i Kristy tena. Rehefa mino marina isika fa amin'ny alalan'ny vavaka Kristy nanome antsika tsirairay. Isika ray aman-dreny ankehitriny no tsara tarehy efatra ny ankizy ao amin'ny fianakaviana dia mitambatra. Andriamanitra no namorona io fanambadiana ho antsika tokoa tsy tonga sy ny sakana izahay, very namana sy ny fianakaviana teny an-dalana fa mbola mivavaka ho. Ny marina dia ny drafitr'Andriamanitra ho antsika dia tsy zavatra natao. Ary ny Baiboly no chock-feno tranga izay miteny eo amin'ny ny drafitr'Andriamanitra sy ny masina fahalavorariana. (Hosea / Gomera dia ohatra tonga lafatra)
Mino aho fa izao tontolo izao fijery ny volon-koditra sendikà no mijaly noho ny tapestry ny fitsarana an-tendrony, mankahala, maro hafa ratsy fanahy sy ny ratsy ny zavatra izay efa namely ny hevitry ny olona satria ny piandohany. Izany no antony mahatonga ny Baiboly izay tantaram-pitiavana lehibe indrindra amin'izy ireo dia mbola manakoako rehetra na dia izany rehetra izany millennias.
Ny vadiko ary efa niaina izany fankahalana aloha-tanany tsy na ny kolontsaina ary na dia tsy ny olon-kafa ny. Izany na dia mahaliana kokoa raha dia avy amin'ny olona izay milaza ho Kristianina, na ireo izay tsy ampiasaina ny tsy fahalalana. Ary rehefa tonga ireo zavatra ireo antsika isika dia mahita izany ho toy ny fitahiana satria mahatsapa fa tena akaiky ny mandre isika ny feon'Andriamanitra, fa tsy ny antsika. izy (Kristy) amin'ny fotoana izay tena mamely antsika amin'ny Galatianina 2:20, Avy eo isika dia mahatsapa ny ady mety te-hanana tsy ny antsika hiady. No ho mora kokoa ny mandre fa? Tsia mihitsy, izy ireo ihany no manambara fanontaniana bebe kokoa tahaka ny: “Ok, Tsy afaka hiady indray Ahoana kosa ny zanako? Ahoana no fomba hiarovana azy tsy ho fankahalana hitany?
Izany no rehefa tonga saina fa ny fanambadiana dia tsy vitan'ny manokana, dia ara-batana fa ara-panahy.
Mivady dia ao amin'ny taona fahasivy momba ny fanambadiana (ampidiro eto tehaka) ary tsy nisy matanjaka kokoa sy miray saina kokoa satria mahita ny asa fitoriana ankehitriny, mety tsy ho toy izany mazava kokoa mihoatra lavitra. Nefa ny Baiboly dia milaza isika no fahazavan'izao tontolo izao, tena dia! Ary ny sasany dia mety tsy mahatakatra izany, nefa avy eo ianao mahita ny vitsy dia izay manao amin'ny tenany: “Eny! Izay roa no tiako fa!”
Ny rahalahiko sy ny mahafinaritra Trip fianakaviany sy ny fianakaviana mivelatra no lazaiko,
Ny dianareo Vao nanomboka ny rahalahiko sy ny anabaviko . Mahereza ao amin'ny Tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Dia Izy no hitari-dalana anao raha mbola tsy mitsahatra ianao nihazakazaka nanatona.
Hisy maro ny sakana fantatro tsara hoe mety ianao no efa niaina azy velona teo amin'ny tany atsimo. Fa ianareo kosa dia ohatra ny tena hatsaran-tarehy ny Andriamanitsika, sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ny fitiavana sy ny fanambadiana izany dia mampiseho tsara indrindra, satria hoy ny Baiboly imbetsaka fa “Fa tsy misy fanajana ny olona amin'Andriamanitra” – Romanina 2:11
Andriamanitra anie hitahy anao sy ny olon-kafa ao amin'ny lahatsoratra ity, izay anarana ny anaran 'i Jesoa Kristy
Achi • Septambra 22, 2017 amin'ny 11:55 aho • navalin'i
Hataoko toy izany koa Godwilling
Dawnn • Septambra 22, 2017 amin'ny 3:16 PM • navalin'i
Rahalahy, Izany no mankasitraka sy manaja anareo etỳ lahatsoratra. Efa reko ry tsara tarehiko anjara ny antony mahatonga ny lehilahy mainty hoditra hanambady vehivavy hafa firazanana / foko. Izany no iray amin'ireo fotoana vitsy nahare aho brotha’ maneho ny maha zava-dehibe ny toetra araka an'Andriamanitra dia ny fampitahana ny antony mahatonga ny vehivavy iray foko Ambony noho ny vehivavy ny iray hafa foko. Ary izany tokoa no fikasany momba ny Fanjakana ny tian'ny. Enga anie ny Andriamanitra hitahy anao hatrany, ny vadinao sy ny fianakavianao!
Trinitee Hudson • Oktobra 20, 2017 amin'ny 12:29 aho • navalin'i
Ny rahalahiko ao amin'i Kristy. Tena voatahy aho noho ity lahatsoratra ity. Misaotra anao mamela ny teny mba hampianatra sy handaminana ny olana ny olona tsy mahatakatra.
Nampahery ahy ny fihetsika ao an-tokantranonao fa koa ny fanompoam-pivavahana marina. Andriamanitra anie hitahy anao sy ny fianakavianao.
Joshua Fordham • Janoary 6, 2018 amin'ny 3:03 PM • navalin'i
Tsy mihevitra fa ilaina ity lahatsoratra ity. Tsy mbola nahita vondron'olona iray mahatsapa fa ilaina mba hanamarinana ny faniriana hanambady fotsy tahaka ny efa hitako tamin'ny mainty hoditra manokana kokoa ny lehilahy mainty. Tsikaritro fa ny mainty hoditra izay daty sy tsy manambady vondrona fotsy dia tsy manamarina ny antony nanambady fa tsy olona fotsy. Raha manao, dia tsy ho any amin'ny ambaratonga fa ny olona mainty hoditra izay nanambady fotsy.
Vao Tena sarotra amin'ny mino fa ireo foko rehetra ny vehivavy tamin'izany sekoly izay manompo an'Andriamanitra sy tia azy amin'ny fomba feno tsy hisambotra ny masonao fa ny fotsy ankizivavy, ny vehivavy izay efa nanao ny olona ho tonga mainty ny kryptonite, tratra ny masonao ho an'ny fanambadiana. Ianao te-hanambady fotsiny fotsy, ary miezaka ny hitondra ho an'Andriamanitra fa ho toy ny fitaovana mba tsy hisehoako toy izany rehetra izany sady voatendrin'Andriamanitra, rehefa fitondran-tena izany talohan'ny fanandevozana.
Raha te-mampiaraka fotsy ekena fa aoka hanoratra lahatsoratra dia midika hoe zavatra tsy misy fandaminana ny fanahinao.
Amen • Janoary 10, 2018 amin'ny 1:04 PM • navalin'i
Tsy mahagaga raha maro be ny antony mainty vehivavy pissed izao andro izao.
Joshua Storm • Febroary 3, 2018 amin'ny 1:50 aho • navalin'i
Mitovy hevitra aminao aho, Trip Lee. No nahatongavako ho fantatra fa ny olona rehetra dia ahitana fanahy, fanahy, sy ny vatana. Noho izany ny fanahy isika olombelona, amin'ny fanahy, ary miaina ao anatin'ny vatana. Tena mampalahelo fa ny ankamaroan'ny olona mijery ny “trano” nefa inona no zava-dehibe fa ny toe-tsaina / fon'ny olona. Tia fotsiny aho mba hanamafisana indray izany ho an'ny olona avy any mamaky ny fanehoan-kevitra eto. Ny olona dia fanahy-panahy. Manana fanahy (fihetseham-po sy eritreritra) ary velona ao amin'ny vatana nofo sy taolana.
Izany fotsy na mainty hoditra ny ankamaroan'ny olona mailaka foana ny mamantatra fotsiny trano izay miaina. Mine mainty, angamba koa dia mainty. Mamaritra ny olona ny loko ny “trano” Toy ny hitsara ny votoatin'ny taratasy avy amin'ny fijery ny valopy. Ny antony hoy izy ireo “ny faty mba hiala sasatra” dia satria tsy ny vatanao, fa miaina ao. Raha toa isika rehetra mankasitraka ireo fahamarinana ireo, misy dia tsy misy firazanana na loko olana. Andriamanitra famoronana, fantany fa eto an-tany no nanaovana ny lamba, ary afaka tsy hoso-doko izany rehetra izany fotsy, na ny mainty rehetra. Ny hatsaran-tarehy ny zavakanto ao amin'ny mifangaro ny loko, tsy iray monja. Izany indrindra hoe nahoana isika no tokony hankalaza ny hazakazaka iray hafa fa tsy ranting momba ny fahasamihafana. A mofomamy misy tsara habetsahan'ny fangaro maro anisan'izany ny atody, sira, siramamy, sns. Rehefa miaraka izy ireo dia mitambatra sy mofo, dia mahazo tsara mofo niala tamin'izany. Miezaha asio sira, siramamy, menaka, ary ny atody eo am-bavanao alohan'ny mofo, ary ianao mety puke ny tsinay avy!
Koa na vadinao / lehilahy no mavo, fotsy, maitso, na na inona na inona misy na inona na inona mendrika ny resaka. Ny teboka dia y'all raha mahita ny fifandraisana fa mihevitra y'all mendrika foana ny fiainanareo rehetra. fe-potoana. Mihevitra amim-pahatsorana aho fa ny olona izay segregate amin'ny fototry ny hazakazaka dia kely-tsaina, ary tsy afaka mahita olona manontolo (fanahy, fanahy sy ny tena).
Biota Macdonald • Mey 14, 2018 amin'ny 10:34 PM • navalin'i
Ny fitiavana fa nanoratra momba izany! Aho amin'ny volon-koditra ny tenako fanambadiana, ary amin'ny lafiny maro aho, afaka hitantara amin'ny be dia be izay nizara.
Triola Dulaney-Ndiaye • Aogositra 20, 2018 amin'ny 12:54 aho • navalin'i
Ny olona sy ny heviny! Ianareo ry zalahy mba ho velona ho an'Andriamanitra! Manana fianakaviana tsara tarehy!
RealityCheck • Septambra 8, 2018 amin'ny 7:41 aho • navalin'i
Wow, fotsy aho ary tsy hifanena na dia mendrika vehivavy fotsy ara-dalàna amin'izao fotoana izao.
Verena • Septambra 9, 2018 amin'ny 7:00 aho • navalin'i
Voalohany oof Ι rehetra te-sayy bilaogy lehibe! ary
nanana fanontaniana quicқ izay Te-hanontany raha үou
tsy mampaninona. Curio aho ᥙ ѕ mba hahitana hоw ianao yourѕelf mampifantoka ny sainao sy hanala pгior ny fanoratana.
I һave nanana fotoana sarotra manamarina ny thoughfs amin'ny mahazo ny eritreritro avy.
I tena no mankafy izany fotsiny writіng na izany aza toa tahaka tһe firet 10 koa 15 minitra no antsika mpiara-ᥙ very juist miezaka ny Fi ց urfe outt ny fomba hanomboka. Any hevitra na hamantatra izany?
miresaka momba: Vehivavy Fa Trump Ary The Black Lehilahy tia azy – volon-koditra Fanambadiana
Jill • Febroary 10, 2019 amin'ny 7:36 aho • navalin'i
Mampiasa foana ny antony hanamarinana ny zavatra ataonao.
Erma • Mey 2, 2019 amin'ny 12:48 PM • navalin'i
Be dia be ny olona iray izay mila ny manokana ho azy ireo, na fotsiny
zavatra hafahafa na manokana.
fisaraham-panambadiana mpisolovava • Jona 19, 2019 amin'ny 1:59 aho • navalin'i
Tsy mampaninona anao ve raha Averiko vitsivitsy ny lahatsoratra raha mbola
I manome bola sy ny loharanom-baovao indray ny toerana?
Ny bilaogy ao amin'ny tena iray ihany toy ny faritra mahaliana anareo sy ny mpitsidika
dia tena handray soa avy amin'ny maro ny vaovao Tonga eto ianao.
Trarantitra ianao, aoka aho fantatro raha izany maninona aminao. Misaotra!
Anarana iombonana amin'ny • Aogositra 2, 2019 amin'ny 3:14 PM • navalin'i
Ꮃ ow, Tsara аrticle ity, ny anabaviko ny fandinihana toy izany
zavatra, dia toy izany aho mba hampahafantarana goіng һer.